2012-06-17 ~ Myanmar Express
ကျော်ကိုကို ဟက်ထရစ် ဂိုးနှင့်အတူ အဖွင့်ပွဲတွင် ဂိုးပြတ် အနိုင်ရသည့် မြန်မာလူငယ်
From : soccermyanmarယနေ့ ညနေ ၆နာရီ ၁၅မိနစ် အချိန်တွင် ယှဉ်ပြိုင် ကစားခဲ့သည့် မြန်မာ ယူ-၂၂နှင့် ဖိလစ်ပိုင် ယူ-၂၂တို့ ပွဲစဉ်တွင် မြန်မာလူငယ် အသင်းက နောက်မှ လိုက်ကစား ခဲ့ရသော်လည်း ကျော်ကိုကို ခြေစွမ်းပြမှုနှင့် အတူ ဂိုးပြတ် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ဖိလစ်ပိုင် အသင်းက စပေးဘော ပေးသည်နှင့် မြန်မာတို့ တရစပ် တက်ဖိအားပေးခဲ့ရာ ကျော်ကိုကို ဘောလုံး ရယူနိုင်ခဲ့ပြီး စက္ကန့်ပိုင်း အတွင်း ကိုက် ၃၀ကျော်ခန့် အကွာမှ ပြစ်ဒဏ်ဘော ကန်ခွင့်ရခဲ့သည်။ ယင်းပြစ်ဒဏ်ဘောအား ကျော်ဇေယျာဝင်း ကန်ခဲ့သော်လည်း နောက်ခံလူများ ထိထွက်ခဲ့သည်။ မြန်မာအသင်းသည် ပွဲချိန် ၄မိနစ်ခန့်အထိ ဆက်တိုက် ဖိကစား နေခဲ့ပြီး ၅မိနစ်၌ တန်ပြန် တိုက်စစ်မှ တစ်ဆင့် ပင်နယ်တီ ပြစ်ဒဏ်ဘော ဖိလစ်ပိုင်အသင်းအား ကန်ခွင့် ပေးခဲ့ရသည်။ ယင်း ပင်နယ်တီအား ခရစ္စတီယမ်က အပိုင် ကန်သွင်းကာ ဖိလစ်ပိုင်တို့ အဖွင့်ဂိုး စတင် ရရှိခဲ့သည်။၈မိနစ်တွင် မြန်မာ တိုက်စစ်မှူး ကျော်ကိုကို ဧရိယာ အတွင်းမှ ခေါင်းတိုက်ခွင့် တစ်ကြိမ် ရရှိခဲ့သော်လည်း တိုက်ချက် လျှံထွက် သွားခဲ့သည်။ မြန်မာအသင်းသည် ဂိုးပေး လိုက်ရပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ကစားကွက် တည်မရဘဲ ဖြစ်နေခဲ့ပြီး ဖိလစ်ပိုင် အသင်းကလည်း တောက်လျှောက် ဖိအားပေးရန် အားထုတ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ပွဲချိန် ၁၅မိနစ် ရောက်သည်အထိ ချေပဂိုး မရသည့် အပြင် အပိုင် အခွင့်အရေးပင် မယ်မယ်ရရ မရဘဲ ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ၁၅မိနစ်တွင် မြန်မာတို့ နှစ်ကြိမ်ဆက် ထောင့်ကန်ဘော ကန်ခွင့် ရခဲ့ပြီး ဒုတိယ တစ်ကြိမ်တွင် ဂိုးသမား ပုတ်ထုတ်ရာမှ ကျလာသည့် ဘောလုံး ဖိလစ်ပိုင် နောက်ခံလူ လက်ထိသဖွယ် ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ဒိုင်ဖြစ်သူက ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။၁၇မိနစ်တွင် ကျော်ဇေယျာဝင်း ထောင့်ကန်ဘောမှ တစ်ဆင့် ကျော်ကိုကို အပိုင် ခေါင်းတိုက်ခဲ့ သော်လည်း ဂိုးဘား ကပ်ကျော် သွားခဲ့သည်။ ၁၈မိနစ်တွင် ရန်အောင်ဝင်း ညာဘက်ခြမ်းမှ ထိုးဖောက် ဖန်တီးပေးသည့် ဘောလုံးအား ကျော်ဇေယျာဝင်း ပိတ်သွင်းရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ သော်လည်း ထိချက် မမှန်ခဲ့ပေ။ ၂၁မိနစ်တွင် နန္ဒလင်းကျော်ချစ် ကွင်းလယ်မှ ထိုးပေးသည့် ဘောလုံးအား အပိုင် ကန်သွင်းကာ ဂိုးပေါက်ထဲ ကန်သွင်းခဲ့ သော်လည်း လူကျွံဘော ဖြစ်နေခဲ့သည်။၂၃မိနစ်တွင် ထောင့်ကန်ဘောမှ တစ်ဆင့် ပြန်အံကျလာသည့် ဘောလုံးအား ဖြိုးကိုကိုသိန်း ကန်သွင်းခဲ့ သော်လည်း နောက်ခံလူ ရှင်းထုတ်ခဲ့သည်။ မြန်မာအသင်းသည် ထောင့်ကန်ဘောများ အကြိမ်ကြိမ် ရရှိသည်အထိ ဖိကစားနေခဲ့ သော်လည်း ဖိလစ်ပိုင် ဂိုးပေါက်ထဲ ဂိုးအဖြစ် ကန်သွင်းနိုင်ခြင်း မရှိသေးဘဲ ဖြစ်နေခဲ့သည်။ ၂၇မိနစ်တွင် နန္ဒလင်းကျော်ချစ် ဘယ်ခြမ်းမှ ဖိလစ်ပိုင် ကစားသမား ၃ဦးအား လိမ်ခေါက် ကျော်ဖြတ်ရာ ဖိလစ်ပိုင် နောက်ခံလူ ဥပဒေပ တားသဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ဘော ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယင်း ပြစ်ဒဏ်ဘောအား ကျော်ဇေယျာဝင်း ကန်တင်ပေးရာ ကျော်ကိုကိုက ထောင့်ကျဉ်းထဲသို့ လှလှပပ ကန်သွင်းခဲ့ပြီး ချေပဂိုး ပြန်လည် ရရှိခဲ့သည်။မိနစ် ၃၀တွင် မြန်မာအသင်း ညာခြမ်းမှ ထိုးဖောက်မှုမှ တစ်ဆင့် ကြည်လင်း ကန်သွင်းခွင့် ရခဲ့သော်လည်း နောက်ခံလူ ထိထွက်ခဲ့သည်။ ၃၂မိနစ်တွင် ကြည်လင်း ညာခြမ်းမှ လှလှပပ ဖြတ်တင်ပေးမှု နောက်ခံလူ ဖျက်ထုတ်ခဲ့၍ ထောင့်ကန်ဘော ဖြစ်ခဲ့သည်။ မြန်မာအသင်းသည် ၃၄မိနစ်တွင် ၁၃ကြိမ်မြောက် ထောင့်ကန်ဘော ရရှိသည်အထိ ဖိလစ်ပိုင် အသင်းဘက်သို့ ဖိကစားလျက် ရှိသည်။၃၈မိနစ်တွင် နန္ဒလင်းကျော်ချစ် ဘယ်ခြမ်းမှ ဖြတ်တင်ပေးမှုအား ကျော်ကိုကို ကန်သွင်းခဲ့ သော်လည်း နောက်ခံလူ ထိထွက် သွားခဲ့သည်။ ၃၉မိနစ်တွင် ကျော်ဇေယျာဝင်း နောက်ပေါက်ဖြင့် ချပေးသည့် ဘောလုံးအား သိန်းသန်းဝင်း ဘယ်ခြမ်းမှ ဖြတ်တင်မှု ရန်အောင်ဝင်း ကန်သွင်းခဲ့ သော်လည်း နောက်ခံလူ ထိထွက်ခဲ့၍ ထောင့်ကန်ဘောသာ ဖြစ်ခဲ့ပြန်သည်။ ၄၁မိနစ်တွင် ကွင်းလယ်မှ ကြည်လင်း ထိုးပေးသည့် ဘောလုံးအား လူကျွံ ထောင်ခြောက်မှ လွတ်ထွက် သွားသည့် ကျော်ကိုကိုက ဆွဲယူကာ အပိုင် ကန်သွင်းခဲ့ပြီး မြန်မာတို့ အတွက် ဦးဆောင်ဂိုး ရရှိခဲ့သည်။ထို့နောက်တွင် မြန်မာအသင်းက ဆက်လက် ဖိကစားခဲ့ရာ ပထမပိုင်း နာကျင်အချိန်ပိုတွင် ညာခြမ်းမှ ဖြတ်တင်ပေးမှုအား ကျော်ကိုကို အသာ လမ်းကြောင်းပြောင်း ကန်သွင်းခဲ့ကာ ၎င်း၏ ဟက်ထရစ်ဂိုးအား ရယူနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ပထမပိုင်း အပြီးတွင် မြန်မာတို့က ၃-၁ဂိုးဖြင့် ပွဲအား ဦးဆောင်ထား နိုင်ခဲ့သည်။ဒုတိယပိုင်း ပြန်အစတွင် မြန်မာအသင်းက ဖိလစ်ပိုင် အသင်းအား ဆက်လက် ဖိအားပေးရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ၅၁မိနစ်တွင် ကြည်လင်း ဖန်တီးပေးသည့် ဘောလုံးအား ကျော်ကိုကို လွတ်ထွက် ကန်သွင်းခွင့် ရခဲ့သော်လည်း ဂိုးသမား ထိထွက်ခဲ့ပြီး ယင်းဘောလုံးအား ကျော်ဇေယျာဝင်း အပိုင် ကန်ခွင့် ရခဲ့သော်လည်း ဂိုးပေါက် ကပ်လွဲသွားခဲ့သည်။ ၅၂မိနစ်တွင် ညာခြမ်းမှ ထိုးဖောက်ရာမှ ပြန်အံလာသည့် ဘောလုံးအား ကြည်လင်း တစ်ချက်တားကာ အပြင်းကန်သွင်း ခဲ့သော်လည်း ဂိုးသမား မိခဲ့သည်။ ၅၄မိနစ်တွင် နန္ဒလင်းကျော်ချစ် ဘယ်ခြမ်းမှ ထိုးဖောက် ကန်သွင်းမှု ဂိုးသမား ပုတ်ထုတ်ခဲ့၍ ဂိုးဘေး ကပ်ထွက် သွားခဲ့သည်။ တစ်ဖန် နန္ဒလင်းကျော်ချစ် ဖန်တီးပေးမှုအား ကျော်ဇေယျာဝင်း ကန်သွင်းခဲ့ သော်လည်း ဂိုးဘေး ကပ်ထွက် သွားခဲ့ပြန်သည်။၅၆မိနစ်တွင် ကျော်ကိုကို ဖန်တီးပေးသည့် ဘောလုံးအား အသင်းခေါင်းဆောင် ကျော်ဇေယျာဝင်း ဂိုးသမားကိုပါ လိမ်ခေါက် ကန်သွင်းခဲ့ သော်လည်း ဂိုးတိုင်ထိထွက် ခဲ့၍ တစ်ဂိုး နစ်နာခဲ့သည်။ ၅၇မိနစ်တွင် နန္ဒလင်းကျော်ချစ် နေရာတွင် သက်နိုင် ၀င်ရောက် ကစားခဲ့သည်။ ၅၉မိနစ်တွင် လူစားဝင် ကစားသမား သက်နိုင် အပိုင် အခွင့်အရေး တစ်ကြိမ် ရရှိခဲ့သော်လည်း အံ့အားသင့်ဖွယ် လွဲချော်ခဲ့သည်။၆၄မိနစ်တွင် နိုင်လင်းဦး အဝေးမှ အပြင်း ကန်သွင်းချက် နောက်ခံလူ ထိကာ လမ်းကြောင်း ပြောင်းခဲ့၍ ထောင့်ကန်ဘော ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယင်း ထောင့်ကန်ဘောအား ဇော်မင်းထွန်း ခေါင်းတိုက်ခွင့် ရခဲ့သော်လည်း ဂိုးဘား ကပ်ကျော်ခဲ့သည်။ ၆၉မိနစ်တွင် ကျော်ဇေယျာဝင်း ဖန်တီးပေးသည့် ဘောလုံးအား ကျော်ကိုကို ဆွဲဝင်ကာ ဂိုးရှေ့ ဖြတ်တင်သလိုနှင့် ဂိုးပေါက်ထဲ ကန်သွင်းခဲ့ရာ ဂိုးဘေး ကပ်ထွက် သွားခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် ဇော်မင်းထွန်း နေရာတွင် ရဲဇော်ထက်အောင်အား ထည့်သွင်းခဲ့သည်။၇၆မိနစ်တွင် မြန်မာအသင်း ကွင်းလယ်မှ အမှတ်မထင် လှမ်းကန်မှုအား ဂိုးသမား ပြန်ပုတ်ထုတ် ခဲ့ရာ ကျော်ဇေယျာဝင်းက နောက်တန်းနှင့် ဂိုးသမား တို့အား လိမ်ခေါက်ကာ မြန်မာတို့အတွက် ပဉ္စမမြောက် ဂိုးအား သွင်းယူ ပေးခဲ့သည်။ ၇၉မိနစ်တွင် မြန်မာအသင်းက ကျော်ကိုကိုအား ကောင်းစည်သူဖြင့် အစားထိုး ခဲ့သည်။ ၈၄မိနစ်တွင် ကြည်လင်း ဧရိယာ အပြင်မှ ဘယ်ခြေဖြင့် ကန်ချက် ဂိုးဘေး ကပ်ထွက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် နှစ်ဖက်စလုံး ဂိုးထပ်မရတော့ဘဲ မြန်မာက ၅-၁ဂိုးဖြင့် ဂိုးပြတ် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။မြန်မာအသင်းသည် လာမည့် ဇွန်လ ၂၅ရက်နေ့ ည ၆း၁၅ အချိန်တွင် ဒုတိယပွဲစဉ် အဖြစ် ဗီယက်နမ် အသင်းနှင့် ဆက်လက် ရင်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။ Myanmar Express
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ်အတွင်း ဆူပူအကြမ်းဖက်သူများ ဖမ်းဆီးရရှိ
From : ခေတ်လူငယ်ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ်၊ ဂူတောင်ကျေးရွာ၊ ဦးကာကျေးရွာတို့မှ ဆူပူအကြမ်းဖက်သူအချို့သည် ဇွန် ၁၉ ရက် နံနက် ၇ နာရီခွဲခန့်က အနောက်ပြင်ကျေးရွာရှိ နေအိမ်အချို့ကို မီးရှို့ခြင်းကြောင့် လူနေတဲ ၃၀ လုံး မီးလောင်ဆုံးရှုံးပြီး ရွာသား ၃ ဦး သေဆုံး၍ ရွာသားအချို့ ဒဏ်ရာရရှိသည့် သတင်းအား ဇွန် ၂၀ ရက်နေ့ည ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းနှင့် ၂၁ ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများ၌ ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဖြစ်စဉ်၌ ဖော်ပြပါ သေဆုံးသူ သုံးဦးအပြင် ဂူတောင်ကျေးရွာမှ ရွာသားကိုးဦးမှာ ပျောက်ဆုံးလျက်ရှိသောကြောင့် ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုကို မလိုလားသော ဒေသခံပြည်သူများက ထပ်မံသတင်းပေးမှု နယ်မြေခံတပ်ရင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းဖော်ထုတ်မှုကြောင့် ရွာသားကိုးဦး၏ အလောင်းများကို အနောက်ပြင်ကျေးရွာ အတွင်းမှ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ထုံးတမ်းစဉ်လာအတိုင်း သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် မိသားစုများမှ ကောင်းမွန်စွာ သင်္ဂြိုလ်ပေးခဲ့သည်။ ထိုသို့ အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှုကို အုပ်စုဖွဲ့ကျူးလွန်ခဲ့သည့် အနောက်ပြင်ရွာသား ၂၂ ဦးအား ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း၊ ကျန် ၃၁ ဦးကို ဇွန် ၂၂ ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း တူမီးသေနတ် (၁) လက်အပါအဝင် သက်သေခံပစ္စည်းများနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိပြီး ဥပဒေအရ ထိရောက်စွာ အရေးယူနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ဆက်လက်၍လည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့ထုတ် မြဝတီ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။Myanmar Express
From : နရဉ္ဖရာ ဆူပူ အကြမ်းဖက်မူများ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ရက်ပေါင်းမျာစွာ တည်ငြိမ် နေခဲ့သော စစ်တွေမြို့တွင် ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ မီးရှို့မူ ပြန်ဖြစ်ပွားရာ ယမန်နေ့ကလည်း စစ်တွေ လေယာဉ်ကွင်း အနီးတွင် မီးရှို့မူ တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။“ စစ်တွေ လေယာဉ်ကွင်း အနီးက အုန်းတောမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ များများတော့ မလောင်ဘူး။ သူတို့အိမ် ကို သူတို့ လာရှို့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ နောက်မီးသတ်ကားက အချိန်မှီ ရောက်လာတော့ မီးက ငြိမ်း သွားပါတယ်။” မျက်မြင် ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့က စစ်တွေတွင် မီးလောင်မှုတခု ထပ်မံဖြစ် ပွား ခဲ့သည်။မီးလောင်မှုမှာ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက် ဦးအောင်ထွန်းဦးလမ်းနှင့် မင်းဘာကြီးလမ်းကြား စစ်တွေ တက္ကသိုလ်ဟောင်းအနီးတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ဒေသခံလူငယ်တဦးမှ ပြောသည်။“မီးလောင်မှုဖြစ်တာက ဇွန်လ ၂၀ ရက်၊ ညဉ့် ၁၀ နာရီခန့်မှာ အစိုးရအမှု ထမ်းတွေ နေတဲ့နေ ရာမှာ ဖြစ်တာပါ။ မီးထဲ အိမ်တချို့ ပါသွားပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာက မီးသတ်တပ်ဖွဲ့က အချိန်မီ မီးငြိမ်း လိုက်နိုင်ပါတယ်။ အကြီးအကျယ်ပျက်စီး တာတော့ မရှိဘူး” ဟုပြောသည်။အဆိုပါရပ်ကွက်၌ အစိုးရအမှုထမ်းများ ဖြစ်သည့် ပင်စင်စား၊ ရဲဝန်ထမ်း၊ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်း များ နေထိုင်သည့် ရပ်ကွက်ဖြစ် သည်။“မီးလာရှို့တာက ဘင်္ဂလီ အမျိုးသမီး တဦးဖြစ်တယ်။ အဲဒီရပ်ကွက်ထဲကို ၀န်ထမ်းတဦးရဲ့ အ၀တ်ကို ၀တ်ဆင်ပြီး လာလျှို့ခဲ့တာပါ။ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားစဉ် အတွင်း ရဲတွေက အဲဒီအမျိုးသမီးကို ဖမ်းဆီး လိုက်နိုင် ပါတယ်” ဟုပြောသည်။မီးရှို့မူများမှာ ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့မှ စ၍ ကွက်ကြားကွက်ကြား ပေါ်ပေါက်နေပြီး သက်ဆိုင်ရာနှင့် မီး သတ်တပ်ဖွဲ့မှ အချိန်မီ သွားရောက် ငြိမ်းသတ်နေရသည်ဟု သိရသည်။ရခိုင်ပြည်နယ် ပဋိပက္ခအတွင်း ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့အထိ သေဆုံးသူ ၆၂ဦး၊ အိုး အိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေး သူ ၉ သောင်းကျော်နေပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။အစိုးရမှ ရခိုင်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အကြမ်းဖက် ဆူပူမူကို တည်ငြိမ်အောင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီဟု ဆိုသော်လည်း လုံခြုံရေးအင်အား နည်းပါးမူကြောင့် တချို့ နေရာများတွင် ဆူပူ အကြမ်းဖက်မူများ ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နေကြာင်း သိရသည်။ Myanmar Express
အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အိမ်တွေကို မီးရှို့ခံရလို့ ရွှေတိဂုံမှ ဆန္ဒပြ
From : ခိုင်မင်းညို ၊ မဲဆောက် ၊ ထိုင်းနိုင်ငံသို့/အယ်ဒီတာဒီဗွီဘီအသံလွှင်ဌာနအောစလို၊ နော်ဝေ။... အကြောင်းအရာ။ ။ သတင်းမှားခြင်းအားပြင်ဆင်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း။ အထက်ပါအကြောင်းအရာကိစ္စနှင့်ပက်သက်၍ ၂၀၁၂-ခု၊ ဇွန်လ ၉-ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သော သတင်း "ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးရွှေတိဂုံဘုရားတွင်ဆန္ဒပြ" ဟုသော သတင်းတွင် အနည်းငယ် လွဲမှားမှုရှိနေပါသဖြင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးသားပေးပါရန် တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။ DVB မှ ပီတာအောင်တင်လိုက်သော ၎င်းသတင်းပါ "ဇွန်လ ၈-ရက်နေ့က ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တချို့ရဲ့လူနေအိမ်တွေကို မီရှို့ဖျက်ဆီးမှု လူတချို့အား သေကြေဒဏ်ရာရအောင်လုပ်မှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့မှာ ရှိတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေက ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ" ဟု သတင်းရေးသားချက်သည် ဆီလျော်ခြင်းမရှိပါ။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ လူနေအိမ်တွေကို မီးရှို့တာနှင့်ပက်သက်ပြီး ရခိုင်များ ဆန္ဒပြစရာအကြောင်းမရှိပါ။ DVB အနေဖြင့် ခင်ဗျားတို့ Mission အရဆိုရလျှင်လည်း Accurate လုံးဝမဖြစ်ပါ။ အမှန်တကယ်လက်ရှိ ဖြစ်ပျက်နေတာကလည်း ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အိမ်တွေကို ဘင်္ဂလီကုလားတွေက ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီး မီးတိုက်နေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာသတင်း၊ မြန်မာပြည်သတင်း စသည်ဖြင့် သတင်းများကို update ဖြစ်ပြီးလျှင် မှန်ကုန်မှုရှိသော DVB သည် သတင်းမှားရန် လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။ မိမိစဉ်းစားသည်မှာ ယခုသတင်းပေးသော သတင်းသမား၏ သတင်းလိုက်မှု အားနည်းချက်ကြောင်းလည်းကောင်း၊ အလုပ်များလှသော အယ်ဒီတာ မျက်စိလျှမ်းသွားခြင်းအကြောင်းလည်းကောင်း၊ သို့တည်းမဟုတ် မောင်တောမြို့၏ ဆက်သွယ်မှုအရ ဆက်သွယ်ရေးအားနည်းချက်ကြောင်းလည်းကောင်း၊ သတင်းပေးသူ၏ မှားယွင်းမှုကြောင့်လည်းကောင်း၊ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် မိမိတို့ သတင်းတချက်မှားသွားလိုက်လျှင် နောက်ဖြစ်လာမည့်အကျိုးဆက်သည် ထုနဲ့ထေးရှည်လျှားလှသည်။ ယခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော မောင်တောအရေးအခင်းနှင့် ပက်သက်၍ ခင်ဗျားတို့ သတင်းဌာနအား ပြည်သူများမှ အထင်အမြင်လွဲမှားသွားခြင်း၊ သတင်းမှန်ကန်တိကျမှုကင်းမဲခြင်းကြောင့် အယုံအကြည်ကင်းမဲ့ခြင်း၊ ဘီဘီစီကဲ့သို့ သပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြမှုများဖြစ်ပေါ်ခြင်း စသည့်နောက်ဆက်တွဲများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သဖြင့် ယခု ဤတောင်းဆိုချက်ရသည့်အချိန်မှစ၍ အယ်ဒီတာအဖွဲ့အနေဖြင့် ယခုသတင်းအား ပြန်လည်တောင်းပန်ပြင်ဆင်ပေးပါရန် တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။ လေးစားစွာဖြင့် Myanmar Express
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေး ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောနယ်မြေ အခြေအနေများ လှည့် လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန နှင့် မြန်မာ့ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းဌေးသည် ယမန်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောနယ်မြေအတွင်း ရှိ ဘူးသီးတောင်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်အနီးရှိ အောင်သပြေကျေးရွာများကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။ ယင်းသို့ စစ်ဆေးရာတွင် ဘူးသီးတောင်မြို့ အလက (၁)နှင့် ရွှေကျင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိသော ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ၌ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာရှစ်ရွာမှ လူဦးရေ ၈၂၈ ဦး အားတွေ့ဆုံကာ အခြေအနေများကို မေးမြန်းစုံစမ်းပြီး ၎င်းတို့၏ သဘောထားများကိုမေးမြန်း၍ အားပေးစကားပြောကြားသည်။ယင်းနောက် တာဝန်ရှိသူများအား လိုအပ်သော လုံခြုံရေးအစီအမံ များ ပိုမိုပြုလုပ်ပေးပြီး ၎င်းင်းတို့ ဆန္ဒရှိသည့်အချိန်တွင် သက်ဆိုင်ရာကျေးရွာ များသို့ ပြန်လည်အခြေပြုနေထိုင်ကာ မိမိတို့၏လုပ်ငန်းများ ပုံမှန်ပြန် လည်လုပ်ဆောင်နိုင်ရေး မှာကြားသည်။ ထို့နောက် လတ်တလော အဆင်ပြေစေရေးအတွက် ထောက်ပံ့ ငွေကျပ် သိန်း ၅ဝ ၊ ဆန်အိတ်(၂ဝ)၊ စားသုံးဆီပိဿာ(၅ဝ)၊ အဝတ်အထည်နှင့် စားသောက်ဖွယ်ရာ များ ထောက်ပံ့ပေးအပ်သည်။ဆက်လက်၍ ဂန္ဓမာစံပြကျေးရွာသို့ သွားရောက်၍ ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာ သားများနေထိုင်စားသောက် လုပ်ကိုင် နေမှုများကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီး ကျေးရွာ များထူထောင်ပေးရသည့် ရည်ရွယ် ချက်နှင့်လူနေမှုအဆင့်အတန်း ပိုမိုမြင့် မားလာစေရေးအတွက် ပိုမိုအားထုတ် ကြိုးပမ်းသွားရန်၊ ကျေးရွာမှ ပညာတတ် လူငယ်များ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးတို့ကို မှာကြားကာ ထောက်ပံ့ငွေများကို ပေး အပ်သည်။ယင်းနောက် ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီး နှင့်အဖွဲ့သည် ဘူးသီးတောင်မှ အောင် သပြေစံပြကျေးရွာသို့ထွက်ခွာပြီး နယ်စပ် ဒေသလူဝင်မှု စစ်ဆေးရေးကွပ်ကဲမှုဌာန ချုပ် အမှတ်(၁)နယ်မြေရုံး ဧည့်ခန်းမ ဆောင်၌ အောင်သပြေကျေးရွာနှင့် အနီး ပတ်ဝန်းကျင် ကျေးရွာများဖြစ်သည့် ရဲအောင်စံရဘွေ၊ ကာလာဒေဘက်၊ စံဇူရီ၊ ကြောင်နဘေ၊ ရွာသစ်ကေ၊ သုပဏ္ဏက ကျေးရွာ(၇) ရွာတို့မှ ရခိုင်၊ ဒိုင်းနက်၊ သက်၊ မြို့ တိုင်းရင်းသားများ၊ ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများအားတွေ့ဆုံ၍ ဝေးလံပြီး လူသူ အရောက်အပေါက်နည်းသော နယ်မြေဒေသဖြစ်သော်လည်း သာယာ စိမ်းလန်းစိုပြည်ကာ သဘာဝအရင်း အမြစ်များ ပေါကြွယ်ဝသည်ကိုတွေ့ရ ပါကြောင်း၊ ပညာရေးဝန်ထမ်း ကျောင်း ဆရာများမှာလည်း ငယ်ရွယ်သန်စွမ်း သည်ကိုတွေ့ရပြီး အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင် လည်း ငယ်ရွယ်သူများ ဦးဆောင်ထမ်း ရွက်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရသဖြင့် ကျေနပ်အားရပါကြောင်း၊ ၎င်းအပြင်ဒေသတွင်း ပြဿနာကြီးငယ်မရှိဘဲ နေထိုင်နိုင်၍ ဝမ်းမြောက်ကြောင်း၊ အေးချမ်းတည်ငြိမ် မှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပြီး လုပ်ကိုင် စရာရှိသည်များကို ပုံမှန်လုပ်ကိုင်သွား ကြရန် မှာကြားလိုကြောင်း၊ မတည် ငြိမ်မှုကြောင့် အချို့ဒေသများတွင် နိစ္စ ဓူဝ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုများကို မလုပ်နိုင်ကြောင်း၊ တရားဥပဒေစိုးမိုး မှုအောက်တွင် အေးအေးချမ်းချမ်း တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နှင့် နေထိုင်သွားကြ ရန်လိုကြောင်း မှာကြားသည်။ထို့နောက် ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ် များ၊ ဝန်ထမ်းများ၏ သဘောထား အမြင်များကို ပြောကြားစေ၍ လိုအပ် ချက်များအား ရှင်းလင်းမှာကြားဆွေး နွေးခဲ့ပြီး အောင်သပြေစံပြကျေးရွာမှ စစ်တွေမြို့သို့ ပြန်လည်ရောက် ရှိသည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးသည် စစ်တွေမြို့၌ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးလှမောင်တင်၊ အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ကိုကိုနိုင်တို့နှင့် နယ်မြေ အခြေအနေတို့ကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အတူ စစ်တွေမြို့ တွင်းရှိ ပျက်စီးမှုအခြေအနေများနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းများကို လှည့်လည် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။Myanmar Express
From : wanglin(yinyinhla) အသက်၁၉နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးတယောက်အစာအိမ်လမ်းကြောင်းကနေကိုယ်ဝန်ဆောင်လို. ခွဲစိတ်ရာမှအသက်ဆုံးရူံးရတဲ.သတင်းကိုဝမ်းနည်းစွာထပ်မံကြားရပြန်ပြီ ဒီတော.ချစ်သူတိုင်းတွေကိုဒီလိုမကြုံမိအောင်သတိပေးချင်တယ်(ယောင်္ကျားလေးအတွက်) ယောင်္ကျားလေးတွေ အထူးသတိထားသင်.တာက ကိုယ်.ပျှော်ရွင်မူကြောင်.ချစ်သူကောင်မလေးအသက်မဆုံးရူံးစေရန်ကာကွယ်ပေး သင်.တယ်လေ ကောင်မလေးတွေဟာ တလတခါသန်ဓေ(ဒီစာလုံးမရေးတတ်ဘူး)နံရံအိမ်သန်.ရှင်းတဲ.ချိန်(ရာသီသွေးဆင်းတဲ.ချိန်ပေါ.) အများဆုံးလည်းတပါတ်ပဲလေ ဒီချိန်မှာသန်ဓေအိမ်ကသုက်ရည်ကိုမလက်ခံနိုင်တော.ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ.သူက်ပိုးတွေကအူလမ်းကြောင်းတွေ အစာအိမ်လမ်းကြောင်းကနေအောင်းနေတတ်ပြီးအောင်မြင်ပါကဒီလိုခွဲစိတ်တဲ.ချိန်မှာအသက်ဆုံးသွား ရတာမကြာခဏကြားနေကြပါတယ် ဒါ.ကြောင်.ကိုယ်.ချစ်သူကိုဒီလိုဆိုးရွားမူကနေလွတ်ကင်းအောင်တန်ဖိုးထားပြီးချစ်ကြပါနော် (ကောင်မလေးအတွက်) ကောင်မလေးတွေကတော.ကိုယ်.ချစ်သူတောင်းဆိုသမျှလိုက်လျော.တတ်ကြတယ်ဒါပေမယ်. ကိုယ်ခန်တာကိုယ်(body)ကမိဘကျေးဇူးကြောင်.ဆင်းသက်လာတာကိုအစဉ်အမြဲမမေ.ထားသင်.ဘူး ဒီတော.ကိုယ်.ကိုပိုချစ်ကြပါနော် ခုခေတ်လူငယ်တွေကလိင်အကြောင်းတွေရိုးနေသလောက်ကာကွယ်မူတွေလည်းအရမ်းပေါ.ဆနေတာများလွန်းတယ် ဒီတော.ဒီစာတင်တာအရှက်မရှိပြီးဆရာလုပ်နေတာမဟုတ်ပါ ကောင်မလေးတွေအားလုံးကိုကာကွယ်ချင်လို. တိုက်ဆိုင်တာရှိရင်လည်းအားလုံးခွင်.လွတ်နော် Myanmar Express
ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးလှမင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းဌေး နှင့် တာဝန်ရှိသူများ ရခိုင်များကို အားပေး
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလှမင်း၊ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာ့စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းဌေး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးလှမောင်တင်နှင့် အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ကိုကိုနိုင်တို့သည် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီး ဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဘုန်းဆွေနှင့် တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါလျက် ယနေ့နံနက်ပိုင်းနှင့် မွန်းလွဲပိုင်းတို့တွင် စစ်တွေမြို့မှတစ်ဆင့် ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ရသေ့တောင်၊ ကျောက်တော်နှင့် ပေါက်တောမြို့တို့သို့ လှည့်လည် သွားရောက်၍ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ မြို့မိမြို့ဖများအား တွေ့ဆုံပြီး အခြားဒေသများမှ တိမ်းရှောင်ရောက်ရှိနေ သူများအား နှုတ်ဆက်အားပေးကြသည်။ ရှေးဦးစွာ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးလှမင်း၊ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းဌေးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ သည် နံနက် ၈ နာရီခွဲတွင် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့သို့ရောက် ရှိကြပြီး လောကမာရဇိန်ဘုရား သိမ်တော်၌ ယာယီ နေရာချထားပေးသည့် အခြား မြို့နယ်များမှ တိမ်းရှောင်လာသူများ အား ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက် အားပေးကြသည်။ ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းဌေး၊ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးလှမောင်တင်နှင့် ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဦးဘုန်းဆွေတို့က တိမ်းရှောင်လာသူများအတွက် ခေါက်ဆွဲခြောက် ထုပ်များ၊ အဝတ်အထည်များနှင့် ပန်း ကန်၊ ဇွန်းများကို တာဝန်ရှိသူများထံ ပေးအပ်ကြသည်။ ယင်းနောက် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှမင်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် အဖွဲ့ ဝင်များသည် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ် ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၌ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး မှူးနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ မြို့မိမြို့ဖများအား လည်းတွေ့ဆုံ၍ ဒေသတည်ငြိမ်အေး ချမ်းရေး ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဆောင် ရွက်ကြရန် မှာကြားကြသည်။ထို့နောက် နံနက် ၁ဝ နာရီတွင် ရသေ့တောင်မြို့သို့ရောက်ရှိကြပြီး မြို့ နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ မြို့မိမြို့ဖများနှင့် တွေ့ဆုံရာ မြို့နယ်အုပ ချုပ်ရေးမှူး ဦးဇေဝဏ္ဏလှိုင်က မြို့နယ် ၏တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိသည့် အခြေ အနေများ၊ စိုးရိမ်စိတ်ကြောင့် တိမ်း ရှောင်လာသူများအတွက် ကယ်ဆယ် ရေးစခန်းများဖွင့်လှစ်၍ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ပေးလျက်ရှိသည့် အခြေ အနေများကို ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ ယင်းနောက် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှမင်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းဌေး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ချုပ်နှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးတို့က လတ်တ လောဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပြည်နယ်အတွင်း ရှိ မြို့နယ်အချို့၏ အခြေအနေများ၊ မ လိုလားအပ်သည်များ ဖြစ်ပွားမှုမရှိဘဲ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိသည့် ရသေ့ တောင်မြို့နယ်၏ အနေအထားကိုထိန်း သိမ်းထားရန်လိုအပ်မှုများ၊ နေအိမ်မီး လောင်ဆုံးရှုံးသူများနှင့် တိမ်းရှောင်လာ သူများ၏ စားရေး၊ နေရေး၊ ကျန်းမာ ရေး၊ မိမိဒေသသို့ ပြန်လည်နေထိုင်နိုင် ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ပြည် နယ်အစိုးရတို့က ဖြည့်ဆည်းစီမံဆောင် ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ ကို ရှင်းလင်းပြောကြားကြပြီး မြို့မိမြို့ဖ များ၏ တင်ပြချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လည်း ရှင်းလင်းဖြေကြားကြသည်။ထို့နောက် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းဖွင့် လှစ်ထားသည့် အခြေခံပညာအထက် တန်းကျောင်းသို့ သွားရောက်၍ အခြား ဒေသများမှ တိမ်းရှောင်လာသူများအား ကျန်းမာရေး၊ နေထိုင်စားသောက်ရေး ကိစ္စများကို မေးမြန်းကာ ထောက်ပံ့ ပစ္စည်းများ ပေးအပ်ကြသည်။ ဆက် လက်၍ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးလှမင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ကျောက်တော်မြို့သို့ လည်း ဝင်ရောက်၍ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ မြို့မိမြို့ဖများနှင့်တွေ့ဆုံပြီး ဒေသတည် ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိစ္စများမှာကြားသည်။ ထို့နောက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ် တွင် ပေါက်တောမြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ဌာနဆိုင်ရာများ မြို့မိမြို့ဖများ၊ ဒေသခံများနှင့် တွေ့ဆုံသည်။ ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကြီးလှမင်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းဌေးနှင့် ပြည် နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးလှမောင်တင်တို့က ယခုအခါ ပြဿနာဖြစ်ပွားသည့် မြို့နယ် အချို့တွင် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုများ ရ ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့ရောက်ရှိခဲ့ သည့် ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ရသေ့တောင်၊ ကျောက်တော်နှင့် ပေါက်တောမြို့နယ် တို့၌ မလိုလားအပ်မှုများ ဖြစ်ပွားခြင်း မရှိသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ ရရှိထား သည့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုများကို ဆက် လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်လိုကြောင်း၊ အဖျက်အမှောင့်ကောလာဟလများကို မယုံကြည်ကြရန် အထူးအရေးကြီး ကြောင်းဖြင့် မှာကြားကြသည်။ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဒုတိယဝန်ကြီး တို့က ဒေသအတွင်းမှ တိမ်းရှောင်လာ သူများအတွက် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ ကို တာဝန်ရှိသူများထံ ပေးအပ်ခဲ့ကြ ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။Myanmar Express
From: မောင်မြင့် အစိမ်းသေ သေသောသူကို သရဏဂုံတင်လို့ရ -မရနှင့် သူ့ရဲ့အသုဘမှာ ငါးပါးသီလ ခံယူလို့ ရ-မရ သိချင်ပါတယ်။ အကြောင်းအကျိုး ယုတ္တိယုတ္တာ သာဓက ၀တ္ထုလေးတင်ပြပေးပါ ဘုရား။ ကျေးဇူးတင် ပါသည်ဘုရား.. အထက်ပါ မေးခွန်းရှင်၏ စကားအရ မည်သည့်နည်းနှင့်သေသူကိုမဆို အလောင်းကို သရဏဂုံတင်လျင် မရနိုင်ပါ၊ နောက် တဖန် သေလွန်သူ၏ အသုဘမှာ ငါးပါးသီလ ခံယူခြင်းသည်လည်း ကျစ်ရစ်သူ မိသားစုများအတွက်သာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်၊ သေပြီးသူအတွက် ထူးခြားမလာပါ၊ သို့ပါသော်လည်း ထိုသို့သရဏဂုံတင်ခြင်းသည် ကျန်ရစ်သူမိသားစု၏ မေတ္တာ၊ ကရုဏာ စေတနာတို့ကို ဖော်ပြရာေ ရာက်သဖြင့် အကျိုးယုတ်ခြင်း မရှိသောကြောင့် ပြုလုပ်သင့်သော ကုသိုလ်ဓလေ့တခုဟု ဆိုသင့်ပါသည်။ လိုရင်းတိုရှင်းဖြေလျင် ဒါလောက်ဆို လုံလောက်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အကြောင်းရင်းကို အကျိုး အကြောင်း ပြည့်စုံစွာ ရှင်းပြမှ အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်တာကြောင့် သိသင့်တာလေးတွေကို ရှင်းပြပါရစေ.. သရဏဂုံ အဓိပ္ပါယ်ဘယံ သန္တာသံ ဒုက္ခံ ဒုဂ္ဂတိပရိကိလေသံ သရတိ ဟိံသတိ ၀ိနာသေတီ တိ သရဏံ၊( ကြောက်ခြင်း ထိတ်လန့်ခြင်းသဘောရှိသော ဆင်းရဲများနှင့် အပါယ်သို့ ကျရောက်စေတတ်သော ကိလေသာတို့ကို ညှင်းဆဲတတ်၊ ဖျက်ဆီးသတ်တတ်သောကြောင့် သရဏ ( ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရာ ) လို့ ခေါ်ဆိုရကြောင်း ) ဂမန-သဒ္ဒါက မှီဝဲဆည်းကပ်ခြင်း ကပ်ရောက်ခြင်းဆိုတော့ (သရဏ- ဂမန) နှစ်ပုဒ်ကို ပါဠိပျက်အနေဖြင့် သရဏဂုံ လို့ ခေါ်ဆိုကြောင်း မူလပဏ္ဏာသ အဋ္ဌကထာ ပ-၁၃၆ မှာ ဆိုထားပါတယ်၊ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်အတွက် ဘ၀မှာ သရဏဂုံဟာ အရေးပါလှပါတယ်၊ ဘုရားဟောဒေသနာများမှာ သရဏဂုံကို အသက်ထက်ဆုံး တည်မြဲစွာ စောင့်ထိန်းခဲ့လျင် ကောင်းရာသုဂတိကို ရောက်နိုင်သလို တမဂ်တဖိုလ်အထိ မျှော်လင့်နိုင် ကြောင်း စသည်ဖြင့် ၀တ္ထုသာဓကတွေ ဟေားထားခဲ့တယ်၊ ထိုသရဏဂုံဟာ အသက်ထင်ရှားရှိစဉ်မှာ ဆောက်တည်ထား ပြီးသော်လည်း သေသွားရင်တော့ အလိုအလျောက် ပျက်ဆီးသွားပါတယ်၊ လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှ သိစိတ်ဝိဥာဉ် မရှိတော့တဲ့ အတွက်ကြောင့် စောင့်ထိန်းမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်လဲ မတည်မြဲတော့ပါဘူး ၊အသက်ရှင်စဉ်မှာ တခြားသော အယူဝါဒ ဘာသာကို ပြောင်းလဲကိုးကွယ်ရင်လဲ သရဏဂုံပျက်တတ်ပါတယ်၊ ထို့ကြောင့် အစိမ်းသေဖြစ်စေ၊ လူကြီးရောဂါဖြင့် မီးစာကုန် ဆီခန်း သေသည်ဖြစ်စေ သေသူကို သရဏဂုံတင်လို့ မရနိုင်ကြောင်းကို ရှေးဦးစွာ မှတ်သားရပါမယ်။ သေသူ၏ အသုဘ၌ ငါးပါးသီလ ခံယူခြင်း ဆိုသည်မှာလဲ ကျန်ရစ်သူတို့က မိမိ၏ ဆွေမျိုးသားချင်းများ ကုသိုလ်ရစေရန် သို့တည်းမဟုတ် သေသူ့အပေါ်တွင် ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်း၊ သံယောဇဉ်ထားကြောင်း၊ စသည်ဖြင့် မေတ္တာစေတနာ ကရုဏာတို့ကို ဖော်ပြလိုသောကြောင့် ကုသိုလ်လုပ်ကြခြင်း ဖြစ်ရ ကား သေ သူအတွက်တော့ သာဓုခေါ်နိုင်သော ဘ၀ရောက်နေလျင် အကျိုးထူးပါမည်၊ သာဓုမခေါ်ဆိုနိုင်သော ဘ၀သို့ ရောက်နေလျင် အကျိုးမထူးပါ၊ ကျန်ရစ်သူ များမှာတော့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတခု ပြုလုပ်ခွင့် ရသွားပါသည်။ ဘုရားခေတ်က သာဓကဘုရားရှင်လက်ထက်က ဇာဏုေဿာဏိ ဆိုတဲ့ ပုဏ္ဏားကြီးတယောက်ရှိတယ်၊ ဒေသနာများမှာတော့ အဲဒီပုဏ္ဏားကြီးဟာ ကတ်သီးကတ်သတ် မေးခွန်းများ မေးလေ့ရှိသူလို့ နာမည်ကြီးသပေါ့၊ တနေ့မှာ အဲဒီ ပုဏ္ဏားကြီးက သေသူကို ရည်စူးကာ အမျှဝေရာတွင် တမလွန်ရောက်နေသူတိုင်း အကျိုးခံစားခွင့် ရှိ မရှိ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို မေးတယ်၊ အဲဒီအကြောင်းကို ဘုရားရှင်နဲ့ ပုဏ္ဏားကြီးတို့ အပြန်အလှန်မေး- ဖြေစကား များကို ကြားရရင် နားလည်နိုင်မည် ထင်ပါသည်။ အရှင်ဂေါတမ - သေသူကို ရည်စူးကာ အမျှဝေရာတွင် တမလွန်ရောက်နေသူတိုင်း အကျိုးခံစားခွင့် ရှိ ပါသလား ပုဏ္ဏားကြီး သာဓုခေါ်နိုင်တဲ့ဘ၀ကိုရောက်ရင် အကျိုးခံစားနိုင်ပါတယ်.ဘယ်လို ဘ၀မျိုးက သာဓုခေါ်နိုင်ပြီး ဘယ်လို ဘ၀မျိုးက သာဓုမခေါ်နိုင်ပါသလဲဘုရား ..သေခါနီးမှာ စွဲလန်းစိတ်နဲ့သေပြီး မကျွတ်မလွတ်တဲ့ တစ္ဆေ သရဲ ပြိတ္တာ စတဲ့ ဘုံဘ၀ကိုရောက်နေရင်၊ ကိုယ်ကလဲ ကောင်းမှုပြုကာ သူ့ကို ရည်စူးအမျှဝေရင်၊ သူကလဲ ၀မ်းသာစွာ သာဓုခေါ်ရင် အကျိုးခံစားခွင့် ရရှိနိင်ပါတယ်၊သေပြီးနောက် လူ့ပြည်၊ နတ်ပြည်၊ ငရဲပြည်ကို ရောက်သွားသူများ၊ တိရိစ္ဆာန်ဘ၀ကိုရောက်သွားသူများဟာ ကျန်ရစ်သူ များက ဘယ်လိုပင်အမျှဝေသည်ဖြစ်စေ သာဓုမခေါ်နိုင်တော့ပါဘူး၊ ဒါ ဆိုရင်ဘုရား.. သူတို့က သာဓုမခေါ်နိုင်ရင် ကုသိုလ်လုပ်ပေမယ့် အကျိုးမရှိတော့ဘူးပေါ့..အကျိုးမရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ရှိပါတယ် ပုဏ္ဏားကြီး၊ ယခုလက်ရှိသေပြီးသူက သာဓုမခေါ်နိုင်သော် လည်း ဆွေမျိုးတော်ပြီး မကျွတ်မလွတ်သေးတဲ့ဆွေမျိုးတွေ အများကြီး ရှိနေတယ်၊ သူတို့ကလဲ ငါတို့ဆွေမျိုးတွေ ဘယ်တော့များ ကောင်းမှုပြုပြီး အမျှဝေကြမလဲ .. လို့ စောင့်စား မျှော်လင့်နေကြတယ်၊ ဒါကြောင့် သူတို့သာဓုခေါ်နိုင်တာကြောင့် အကျိုးရှိပါတယ်.. အဲဒီလို ဆွေမျိုးတော်သူတွေ မရှိတော့ဘူး ဆိုရင်ရော ဘုရား ..ပုဏ္ဏားကြီး ရှည်လျားလှတဲ့ သံသရာမှာ ဆွေမျိုးမတော်စပ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူဆိုတာ မရှိနိုင်ဘူး၊ ဒါကြောင့် ကိုယ်ပြုသမျှ ကုသိုလ် ဟာ အလကားမဖြစ်ပါဘူး လို့ မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ တဆက်ထဲတွင် သေပြီးနောက် (၇) ရက်လွန်လျင် (၅) ရက်လွန်လျင် ရက်လည်ဆွမ်းသွပ်၊ ပရိတ်တရားတော်နာခြင်း စသည်တို့ကို လူအများစု ယုံကြည်နေကြသည်ကား သေပြီးနောက် တပတ်တိတိ ကျန်ရစ်သူအိမ်သူအိမ်သားတို့၏ ပတ်ဝန်း ကျင်မှာ ကျင်လည်နေကြမြဲဖြစ်သည်၊ ရက်လည်ပြီးကာမှ သွားလိုရာ ဘုံဋ္ဌာန၊ ရောက်သင့်ရာဘုံဋ္ဌာန တခုခုသို့ ရောက်ကြရ သည် ဟူသော အန္တရာဘ၀ ဒိဋ္ဌိ ( ပစ္စုပ္ပန်ဘ၀နှင့် တမလွန်ကြားတွင် ဘ၀တခုရှိနေသေးသည် ) ဟူသော မှားယွင်းသော အယူ အဆရှိနေသောကြောင့် လုပ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ အမှန်တော့ မကျွတ်မလွတ်သေးသော တစ္ဆေ သရဲ ပြိတ္တာတို့ ဖြစ်နေမှသာ သာဓုခေါ်နိုင်ပြီး ကောင်းကျိုးချမ်းသာများ ခံစား စံစားနိုင်ပါသည်။ အထူးအားဖြင့် အစိမ်းသေ ( accident ) တခုခုဖြင့်သေလွန်သူကို စာပေစကားအရ ဥပေစ္ဆေဒက ကံ ဖြင့် သေသူလို့ ဆိုရပါမယ်၊ ထိုသူမျိုးဟာ သေခါနီးတွင် ကြောက်လန့် ထိတ်လန့်ခြင်း၊ အော်ဟစ်ခြင်း၊ နာကျင်သော ဝေဒနာကို ခံစား နေရသဖြင့် ကုသိုလ်ဖြစ်စေမည့် ဘုရားတရားအာရုံကို နှလုံးသွင်းဖို့ ခဲယဉ်းသောကြောင့် ဘ၀ကူး ကောင်းဖို့လည်း ခက်ခဲ ပါလိမ့်မည်။ ထိုသူမျိုးအတွက် အမျှဝေရန် ဧကန်လိုအပ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာအလိုအရ ဒီဘ၀ စုတိစိတ်ကျပြီးလျင် နောက်ဘ၀တွင် ခဏငယ်အနည်းငယ်သာခြားပြီး ပဋိသန္ဓေနေရသည် ဟု အတိအလင်းဖော်ပြထားသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ မြန်မာပြည်မှာ သေသွားသူသည် အင်္ဂလန်၊ ပြင်သစ် အမေရိကန် စသောဝေးလံသောအရပ်သို့ တခဏချင်း သွားရောက် ၀င်စားနိုင်ပေသည်။ ဥပမာ စိတ်သည် ယခုချက်ချင်း မရောက် ဖူးသေးသော တနေရာကို အာရုံပြုလျင် ချက်ချင်းလက်ငင်း အချိန်မဆိုင်းပဲ ရောက်ရှိနိုင်သောကြောင့်ပင်၊ ထို့အတူ ပဋိသန္ဓေစိတ်သည်လည်း အာရုံပြုမိရာ တနေရာ ရာကို ရောက်နိုင်ပါသည်၊ စိတ်၏ လျင်မြန်ပုံကား ဥပမာပြဖို့ပင် မဖြစ်နိုင် တော့ပါ၊ အနှစ်ချုပ်အနေဖြင့် လူတယောက်မှာ သေဆုံးသွားရင် ထိုပုဂ္ဂိုလ် တသက်လုံးဆောက်တည်လာခဲ့တဲ့ သရဏဂုံဟာ အလိုလို ပျက်ဆီးသွားပါတယ်၊ ခံယူနိုင်စွမ်း စိတ်ဝိဥာဉ် မရှိတော့လို့ပါ၊ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုများကလဲ ဘာမှ မတတ် နိုင်ကြတော့ဘူး ဆိုတော့ ဒီဘက်ဘ၀မှာ ငါတို့တော့ လက်လွှတ် လိုက်ရပြီ၊ သို့သော်လည်း ဟိုဘ၀မှာ သတိရလျင် သရဏဂုံဆက်ပြီး ယူပါစေတော့ရယ်လို့ ရည်စူးကာ လူသေကို သရဏဂုံတင်ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။Myanmar Express
ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း များအတွက် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများရောက်ရှိ
ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့ နယ်အချို့ ၌ ဖွင့်လှစ်ထားသည့်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ရောက်ရှိသူများ၏ စားသောက်ရေး၊ နေထိုင်ရေး၊ ကျန်းမာရေးစသည့် လိုအပ်ချက်များကို လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထား ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရနှင့် အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တို့ကအချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။ ယနေ့နံနက်ပိုင်းနှင့် မွန်းလွဲပိုင်းတို့တွင် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများ၌ အသုံး ပြုရန် တစ်နာရီ လီတာတစ်သောင်းကျ ရေသန့်စက်တစ်စုံ၊ မိုးကာတဲများ၊ မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်မှ လှူဒါန်းသော အဝတ်အထည်များ၊ ဓာတ်ဆားထုပ် များ၊ ကြက်သွန်နီ၊ အာလူး၊ မာမီးခေါက်ဆွဲ၊ နှစ်ပြန်ကြော်၊ ငါးခြောက် များအပါအဝင် လိုအပ်သည့် ကယ်ဆယ်ရေးထောက်ပံ့ပစ္စည်းများမှာ တပ်မတော်လေယာဉ်များဖြင့် ရန်ကုန်မြို့မှ စစ်တွေလေဆိပ်သို့ ရောက် ရှိလာရာ တပ်မတော်သားများ၊ မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီနှင့် မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များက သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေး သည်။Myanmar Express
နည်းပညာတက္ကသိုလ်များ၌ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်မှ စတင်ပြီး ခြောက်နှစ် သင်ကြားရမည်
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းများ၌ ယခင်က အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(B.E) ရရှိရန် ငါးနှစ် သင်ကြားခဲ့ရရာမှ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်မှ စတင်ပြီး ငါးနှစ်အစား ခြောက်နှစ် ပြန်လည် သင်ကြားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်နည်းပညာ တက္ကသိုလ် အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ရရှိသော သတင်းများအရ သိရှိရသည်။ နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းများ၌ B.E ဘွဲ့ရရန် ခြောက်နှစ် ပြန်လည်သင်ကြားရမည် ဖြစ်ကြောင်းကို ''တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွေမှာ B.E ဘွဲ့ရဖို့အတွက် ငါးနှစ် သင်ကြားရတယ်။ အခုတော့ ငါးနှစ်အစား ခြောက်နှစ် သင်ကြားဖို့ကို သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနက ခွင့်ပြုထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ကလေးတွေ နည်းပညာတက္ကသိုလ် စတက်ပြီဆိုရင် ခြောက်နှစ် ပညာရေးစနစ်ကို စတင်သင်ကြားကြရမှာပါ'' ဟုလည်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ ယင်းကဲ့သို့ သင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် ဘာသာရပ်အလိုက် ထည့်သွင်းသင်ကြားရမည့် သင်ခန်းစာများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးမှုများကို ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းလည်း သိရှိရပါသည်။ ''အခုဆိုရင် မေဂျာအလိုက် ထည့်သွင်းရမယ့် သင်ခန်းစာတွေကို ဆွေးနွေးနေပါပြီ။ အရင်တုန်းက နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွေမှာ ခြောက်နှစ် သင်ကြားရတာပါ။ နောက်ပိုင်း ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် ၀န်းကျင်လောက်မှာ ခြောက်နှစ်အစား ငါးနှစ်သင်ကြားဖို့ လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ AGTI အတွက် နှစ်နှစ်၊ B.Tech အတွက် နှစ်နှစ်၊ ပြီးမှ BE ဘွဲ့ရဖို့ တစ်နှစ် တက်ရတယ်။ အခုခြောက်နှစ် သင်ကြားမယ့် စနစ်အရ BE ဘွဲ့ရဖို့ နှစ်နှစ် တက်ရမှာပါ။ တချို့ကျောင်းတွေမှာ အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ် ၁၁ ခု သင်ကြားနိုင်ပေမယ့် တချို့ကျောင်းတွေမှာက မသင်နိုင်သေးဘူး။ အဲဒါတွေအတွက်ပါ ညှိနှိုင်းနေပါတယ်'' ဟုလည်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ Myanmar Express
မောင်တောမြို့ နယ်အတွင်း ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများမှ ဒေသခံပြည်သူများ နေရပ်သို့ ပြန်လည်နေထိုင်
မောင်တောမြို့နယ် (၄) မိုင် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွင် တိမ်း ရှောင်ရောက်ရှိနေသည့် ဒေသခံ ပြည်သူများအနက်မှ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဇွန် ၁၇ ရက်က သာယာကုန်းကျေး ရွာမှ ၂ဝ၅ ဦး၊ ကန်သာယာ (အထက်ကျေးရွာ)မှ ၄ဝ၃ ဦး၊ ငွေတောင်ကျေးရွာမှ ၂ဝ၈ ဦး၊ မောရဝတီကျေးရွာနှင့် မကျီးကုန်း ကျေးရွာများမှ ၆၃ ဦး၊ ကံပြင် သာစည်ရွာမှ ၁၄၈ ဦး၊ ဝေသာလီ ရွာ မှ၁၃၁ ဦး စုစုပေါက်း အိမ်ထောင်စု ၂၁၃ စု၊ မိသားစု ၉၈၁ ဦးနှင့် အောင်မြေဗောဓိ လိုတော်ပြည့် ကျောင်းတိုက် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း တွင် ရောက်ရှိနေသူများအနက်မှ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဇွန် ၁၈ ရက်က ကိုင်းကြီးကျေးရွာမှ မိသားစု ၇ဝ ဦးတို့သည် နယ်မြေဒေသမျာ အေးချမ်းတည်ငြိမ်ပြီးဖြစ်၍ မိမိနေရပ် အသီးသီးသို့ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြ သည်။ အဆိုပါအိမ်ထောင်စုများအား သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေခံတပ်မတော်သားများ၊ နယ်စပ်ဒေသ လူဝင်မှုစစ်ဆေးရေး ကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ မြန်မာ နိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ သတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ပစ္စည်းများ ကူညီသယ်ယူခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် လိုက်ပါပို့ဆောင် ပေးခြင်း၊ နေအိမ်များပြုပြင်ပေးခြင်း၊ ယာယီအဆောက်အအုံများ ဆောက် လုပ်ပေးခြင်း၊ လုံခြုံရေးလိုက်ပါဆောင် ရွက်ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ မောင်တောမြို့ နယ်အတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ဆက်လက်ရှိစေ ရေးနှင့်လုံခြုံရေးအတွက် နယ်မြေခံတပ် ရင်း/တပ်ဖွဲ့များ၊ နယ်စပ်ဒေသ လူဝင်မှု စစ်ဆေးရေး ကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်၊နယ်မြေ/ စခန်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။Myanmar Express
စစ်တွေမြို့ နယ်မြေခံဆေးတပ်ရင်းမှ ဆေးဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများ၌ ကျန်းမာရေးပညာပေး ဟောပြော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ လှည့်လည်စစ်ဆေး ကု
စစ်တွေမြို့ နယ်မြေခံဆေးတပ် ရင်းမှ ဆေးဝန်ထမ်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များ သည် ဇွန် ၁၇ ရက်တွင် စစ်တွေမြို့ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများ၌ ရောက် ရှိနေကြသူများကို ဖျားနာမှုမရှိစေ ရေး၊ ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှောရောဂါမဖြစ် ပွားစေရေးအတွက် သိရှိလိုက်နာ ဆောင်ရွက်သင့်သည့် ကျန်းမာရေး ပညာပေးများကို ဟောပြောဆွေး နွေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါဆေးဝန်ထမ်း တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် စစ်တွေမြို့ ဦးရဲကျော်သူ (သံကျောင်း)ကျောင်း တိုက်၊ ဆင်ကူးလမ်းဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းနှင့် သဲချောင်းကျေးရွာ အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်း တွင်ရောက်ရှိနေကြသော မိသားစု များအားလိုအပ်သည့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများကို နံနက်ပိုင်း နှင့် မွန်းလွဲပိုင်းတို့တွင် လှည့်လည် စစ်ဆေးကုသဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြ ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။Myanmar Express
From : ရွှေရိုးကုလသမဂ္ဂနှင့် အာဖရိကတိုက်၏ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် သမိုင်းမြှုပ်ကွက်တခု အသစ်ပေါ်ထွက်လာပြန်ပြီ ဖြစ်သည်။ ၎င်း မှာ ဆွီဒင်နိုင်ငံသားကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ ဒုတိယမြောက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်သည့် ဒက်ဟမ္မားရှိူး (Dag Hammarskjold) စီးနင်းလိုက်ပါလာသည့် လေယာဉ်သည် မှတ်တမ်းတင်ထားသကဲ့သို့ သွေးရိုးသားရိုးပျက်ကျမှုမျိုး မဟုတ်ဘဲ ပစ်ချလုပ်ကြံခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ဆွီဒင်နိုင်ငံသားကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ ဒုတိယမြောက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်သည့် ဒက်ဟမ္မားရှိူး ယခု ဖောက် ထုတ်တွေ့ရှိရသည့်ယူဆချက်အသစ်မှာ လွတ်လပ်သည့်သုတေသီတဥိးဖြစ်သည့် ဆွီဒင်နိုင်သား၏ လေ့လာဆန်းစစ်ချက် များအရ သိရှိရခြင်းဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့် အနှစ်ငါးဆယ် (၁၉၆၁) ခုနှစ်က မြောက်ရိုဒီရှား (Northern Rhodesia) (ယခုဇမ်ဘီယာ now Zambia) ၌ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် စီးနင်းလိုက်ပါလာသည့် လေယာဉ်ပျံပျက်ကျခဲ့ပြီး လေ ယာဉ်ပေါ်ပါလာသူ (၁၅) ဦးလုံး သေဆုံးခဲ့ရသည်။ ယခုတွေ့ရှိချက်များအရ ထိုပျက်ကျမှုမှာ သာမန်ပျက်ကျမှု မဟုတ်ဘဲ ထိုစဉ်ကမြောက်ရိုဒီရှားကိုလိုနီ အာဏာပိုင် ဗြိတိသျှတို့က ပစ်ချလုပ်ကြံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု စုံစမ်းတွေ့ရှိရသည့် အချက်အ လက်များက ညွန်ပြလျက်ရှိသည်။ထိုပျက်ကျမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဗြိတိသျှစုံစမ်းရေးကော်မရှင်က လေယဉ်မှူး၏အမှားအဖြစ် သတင်းပို့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှကော်မရှင်၏စုံစမ်းချက်များကို ကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကလည်း ဆက်လက်အတည်ပြုခဲ့သည်။ ထိုကော် မရှင်နှစ်ခုတို့သည် လေယဉ်ပျက်ကျမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးရာ၌ အဖြစ်မှန်ကို ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်မည့် အဓိက မျက်မြင်သက်သေဖြစ်သည့် အနီးဝန်းကျင်မှ ကျေးရွာသားများကို မေးမြန်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ ထိုသက်သေ များ၏ပြောဆိုချက်များကို ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ယခုတွေ့ရှိရသည့် အချက်အလက်များမှာ ယခုတိုင် သက်ရှင်လျက်ရှိသော ထိုစဉ်က မျက်မြင်သက်သေများ၏ ထွက်ဆိုချက်များကို အခြေခံထားသည်။ ထိုမျက်မြင်သက်သေတို့၏ ထွက်ဆိုချက် များအရ တွေ့ရှိလာရသည့် အချက်အလက်သစ်များမှာကြီးမားသည့် လုပ်ကြံမှုကြီးဖြစ်နေသည့်အတွက် သုတေသီက ဆက်လက်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရန် စိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေသည်။လေယဉ်ပျက်ကျသည့် ဒိုလာ (Ndola) မြို့စွန် ဆင်ခြေဖုံး ရပ်ကွက်များတွင် နေထိုင်သူများ၏ ပြောကြားချက်အရ ကုလ သမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် စီးနင်းလိုက်ပါလာသည့် ဒီစီ-၆ (DC6) လေယာဉ်ကို ဒုတိယမြောက်လေယာဉ် အသေးစားတ စီးမှ ပစ်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု တညီတညွတ်တည်း ထွက်ဆိုခဲ့ကြသည်။ မြောက်ရိုဒိရှားဗြိတိသျှ အာဏာပိုင်များက လေ ယာဉ်ပျက်အား ရှာဖွေတွေ့ရှိကြောင်း ရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြားခြင်းမပြုမီအနီးဝန်းကျင် နယ်မြေအာ စစ်တပ်မှ ဝန်းရံပိတ် ဆို့လိုက်ပြီး ကျေးရွာသားများအား အဓမ္မခြိမ်းခြောက် မောင်းထုတ်ပစ်ခဲ့သည်။ယခုတွေ့ရှိရသည့် အချက်အလက်များသည် ဇိုရမ်ဗော့ဒါးဆို (Goran Bjorkdahl,)သည့် ဆွီဒင်အမျိုးသား၏ တကိုယ်တော် လေ့လာစုံစမ်းမှုများအရ ပေါ်လာရခြင်းဖြစ်သည်။ ဇိုရမ်သည် အဆိုပါဒေသတွင် အမှုထမ်းခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ် တဦး၏ သားဖြစ်ပြီး ၎င်းဖခင်၏ပြန်လည်ပြောပြချက်များကြောင့် ဤလေယာဉ်ပျက်ကျမှုကို စုံစမ်း ဖော်ထုတ်ရန် စိတ် အားထက်သန်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ၎င်းက “ကျနော့်အဖေဟာ ဇမ်ဘီယာမှာ ၁၉၇၀ လောက်မှာ တာဝန်ကျခဲ့တယ်။ လေယဉ် ပျက်ကျတဲ့ နေရာကိုလည်း ရောက်ခဲ့တယ်။ ဒေသခံတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ဒီအဖြစ်ပျက်ကို စုံစမ်းကြည့်ခဲ့တယ်။ ရွာ သားတဦးက လေယာဉ်အပိုင်းအစတခုကိုပေးပြီး သူတို့ မျက်မြင်တွေ့ ရှိချက်တွေကို ပြောပြခဲ့တယ်။ အဲဒီ့အချိန်ကစပြီး ကျနော် ဒီကိစ္စရဲ့ အဖြစ်မှန်ကို သိချင်လာတယ်။ တကိုယ်တော် စုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။”မစ္စတာဇိုရမ်ဗော့ဒါးသည် ကျေးရွာသားများ၏ ထွက်ဆိုချက်များအပြင် လေယဉ်ပျက်ကျခဲ့သည့် ၁၉၆၁ ခုနှစ် စက်တင် ဘာ ၁၇ ရက် မတိုင်မီရက်များအတွင်းက ဗြိတိသျှကြေးနန်းဆက်သွယ်မှတ်တမ်းများကိုလည်း ဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့သည်။ ထိုကြေးနန်းများအရ ဗြိတိသျှနှင့် အမေရိကန်တို့သည် ကတန်ဂါ (Katanga) အရေးအခင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ချက်များကို အလွန်ဒေါသ ထွက်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည်။ စိန်၊ ကြေးနီ၊ ယူရေနီ ယံနှင့် သယံဖာတပေါကြွယ်ဝသည့် ကတန်ဂါသည် ကွန်ဂို (Congo) နိုင်ငံမှ ခွဲထွက်ရန် လက်နက်ကိုင်ပုန်ကန်နေသည်။ထို ကတန်ဂါ ခွဲထွက်ရေးစစ်တွင် ဗြိတိသျှ၊ အမေရိကန်နှင့် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ တို့မှ ကြေးစားစစ်တပ်များဖြင့် အလုံးအ ရင်း အားပေးထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ ကုလသမဂ္ဂဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် (၁၆၁) အရ ထိုကြေစားတပ်များ ကတန်ဂါမှ ထွက် ခွာသွားရန်နှင့် ထွက်ခွာခြင်းမပြုပါက ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးတပ်မျာမှ တိုက်ခိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထိုဆုံးဖြတ်ချက် အား အကောင်အထည်ဖော်၍ ကြေးစားတပ်များအား တိုက်ခိုက်ရန် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်က ဆုံးဖြတ်အ မိန့်ပေးခဲ့သည်။ တည်ကြည်၍ ကိုယ်ပိုင်အမြင်နှင့် လွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်တတ်သည့် ဆွီဒင်နိုင်ငံသား အတွင်းရေးမှူး ချုပ်သည် ကုလသမဂ္ဂဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သော ကိုလိုနီနယ်မြေများ လွတ်မြောက်ရေးကို စိတ်အားထက်သန် ဆောင်ရွက် တတ်လေ့ရှိသည်။ ထိုသို့ ၎င်း၏ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဝင် အင်အားကြီးနိုင်ငံများ၏ မျက်မုန်းကျိုးခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ၎င်းမှာ သေဆုံးစဉ်ကာလ၌ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရာထူး ဒုတိယသက်တမ်းအတွက် ရွေး ချယ်တင်မြောက်ခံရဖို့ သေချာသလောက်အခြေအနေတွင် ရှိနေသည်။သုတေသီ ဇိုရမ်ဗော့ဒါးက ၎င်းစုံစမ်းဖော်ထုတ်တွေ့ရှိချက်မျာကို နိဂုံးကောက်ချက်ပြုရာတွင် “ဒက်ဟမ္မားရှိူးရဲ့ လေယဉ် ကို အမည်မသိ ဒုတိယလေယာဉ်က ပစ်ချခဲ့တာ အခိုင်အမာဖြစ်တယ်။ ဗြိတိသျှ ရိုဒီရှားကိုလိုနီ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ လုံခြုံရေးတပ်တွေက ရှာဖွာကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို နှောက်နှေးအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ အနီးဝန်းကျင် နယ်မြေတွေကို ပိတ်ဆို့ရှင်းလင်းတယ်။ တွေ့ရှိပြီးအချိန် အတော်ကြီးကြာမှ တရားဝင် ကြေငြာခဲ့တယ်။ လေယဉ်ပျက်မှာ ပျက်ကျ မှုမှာ အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ တဦးတည်းသော ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်း ဆေးဝါးကုသတာ အသေအချာမလုပ်ဘဲ ရတဲ့ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ သေသွားအောင် တမင်ပစ်ထားခဲ့တယ်။” ၎င်း၏ နောက်ဆုံးအချိန် ကာလအတွင်း ဒက်ဟမ္မားရှိူးက ဗြိတိသျှ သံအရာရှိတဦးသည် ခွဲထွက်ရေး ကတန်ဂါ သူပုန်များအား လျှို့ဝှက်ထောက်ခံနေပြီး ကုလသမဂ္ဂကြီး ကြပ်မှုဖြင့် ဆွေးနွေးအဖြေရှာသည့် ကြိုးပမ်းမှုများကို ဟန့်တားနှောက်ယှက်နေသည်ဟု သံသယဖြစ်ခဲ့သည်။ကတန်ဂါ သူပုန်များအား တိုက်ခိုက်ရန် ဆုံးဖြတ်အမိန့်မပေးမီ အတွင်းရေးမှူးချုပ်အား ထိုသို့ ဆုံးဖြတ်ပါက အမေရိ ကန်နှင့် ဗြိတိသျှ အင်္ဂလိပ်တို့က အလွန်အမျက်ထွက်စိတ်ဆိုးကြလို့မည်ဟု ၎င်း၏ အကြံပေးများက အတွင်းရေးမှူးချုပ် အား သတိပေးခဲ့သည်။ ထိုကြားမှ တိုက်ခိုက်ရန် အမိန့်ကိုပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပျက်ကျသည့် လေယာဉ်ခရီးစဉ်မှာ တိဗြိသျှ တို့၏ အစီအမံဖြင့် နိုဒါမြိ့တွင် ကတန်ဂါ သူပုန်များနှင့်တွေ့ဆုံရန် သွားရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ယခုတွေ့ရှိချက်များသည် ထိုစဉ်က မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ သက်သေများဖြစ်သည့် ယခုအခါ အသက် (၇၀)မှ (၈၀) အကြား ရှိ ကျေးရွာသားများ၏ ထွက်ဆိုချက်များကိုအခြေခံသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်များအား ယခင်က မည်သူတဦးတယောက်က စုံ စမ်းမေးမြန်းခဲ့ခြင်း မရှိပေ။ အသက် (၈၄) နှစ်ရှိ မျက်မြင်သက်သေတဦးဖြစ်သည့် မစ္စတာဒါတန်ဘီဝီ (Dickson Mbewe) သည် အခင်းဖြစ်ပွားစဉ်ညက ၎င်း၏ အိမ်ျေရှ့တွင် မိတ်ဆွေများထိုင်၍ စကားပြောနေခဲ့သည်။ ထိုစဉ် “လေယာဉ်ပျံတဦး က လေယဉ်ကွင်းပေါ်မှာ ဝဲနေတာတွေ့လိုက်တယ်။ ပထမတော့ အလေးမထားမိဘူး။ နှစ်ကြိမ်၊ သုံးကြိမ်လောက်ရှိတော့ သတိထားမိတယ်။ လေယဉ်ပျံပျံကွင်းက ဆင်းသက်ခွင့်မပေးလို့ ဝဲနေတာလို့ထင်တယ်။ သိပ်မကြာဘူး နောက်ထပ် လေ ယဉ်ပျံတစင်းပေါ်လာတယ်။ အဲဒီတစင်းက သေးတယ်။ ပိုပြီးတော့လည်းမြန်တယ်။ ရှေ့ကလေယာဉ်ပျံကြီးနောက် ကို မောင်းလိုက်သွားတယ်။ အနီးကပ်ရောက်တော့မှ မီးရှူးမီးပန်းတွေ လွတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ တခြားတဖက် ကို မောင်းထွက်သွားတယ်။ ရှေ့ကလေယဉ်ပျံကြီးကတော့ ပျက်ကျသွားတယ်။” ဟု ပြန်ပြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ မစ္စတာ ဘီဝီမှာ မီးသွေးဖုတ်သမားတဦးဖြစ်ပြီး နောက်မနက် ငါးနာရီခန့်တွင် လေယဉ်ပျက်ကျရာအနီးရှိ ၎င်း၏ မီးသွေးဖိုသို့ သွားရာ စစ် သားများ ရောက်ရှိနေပြီး အားလုံးကို ခြိမ်းခြောက် မောင်းထုတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ရိုဒီရှားး အာဏာပိုင် များက လေယဉ်ပျက်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိကြောင်း နေ့လည်သုံးနာတွင်မှ တရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်။၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားရာတွင် “လူဖြူစစ်သားတစုက လူသေအလောင်းတခု ကို ရှေ့နှစ်ယောက် နောက်နှစ်ယောက် သယ်သွားတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီနေရာကို ဘယ်သူ့မှ နေခွင့်မပေးတော့ဘူး။” တချို့ပြောတာကတော့ လေ ယာဉ်ပျက်က တယောက်တော့ အသက်ရှင်နေသေးတာ တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဘီဝီသည် ထိုအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်၍ မည် သူ့ကိုမျှ ပြန်လည်ပြောပြခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ “ကြည့်ရတာ အခြေအနေတွေ က အေးအေးဆေးဆေး ပုံမှန်မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီ့ အနီးဝန်း ကျင်မှာရှိတဲ့ ကျုပ်တို့အားလုံး ခြိမ်းခြောက် မောင်းထုတ် ခံခဲ့ရတယ်။ ကြောက်တာနဲ့ ရဲစခန်းလည်း သွားသတင်းမပို့ရဲဘူး၊ သွားရင်တော့ အသေအခြာ အဖမ်းခံရမှာပဲ။”မျက်မြင်သက်သေ နောက်တဦးမှာအသက်(၇၅)နှစ်ရှိ မစ္စတာချီပိုရာ (Custon Chipoya) ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာလည်း မီးသွေး ဖုတ်သမား တဦးပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကလဲ ပထမလေယဉ်ကြီးကို ဒုတိယလေယဉ်ပျံက ပစ်ချခဲ့ကြောင်း သက်သေခံ ပြောကြားခဲ့သည်။ “ဂျိုးဂျိုး ဂျိမ်းဂျိုမ်းအသံနဲ့ လေယာဉ်ပျံတစီးကို တွေ့လိုက်တယ်။ လေယာဉ်ထဲက မီးရောင်တွေကို တောင်ရှင်းရှင်းကြီးတွေ့နေရတော့ ဆင်းဖို့လုပ်နေတာလို့ ကျနော်ကထင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် လေယာဉ်ပျံက နောက်တ ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ ဝဲလာပြန်တော့ ကျနော်တို့အားလုံးက အလေးထား ကြည့်လိုက် မိတယ်။ တတိယခေါက်ဝဲလာပြီး လေဆိပ်ဆီကို ဦးတည်ပျံနေတဲ့အချိန် လေယာဉ်ပျံလေးတစီး ရုတ်တရက် ပေါ်လာပြီး လေယဉ်ကြီးနောက်ကို လိုက် သွားတယ်။ အဲဒီလေယာဉ်ပျံက ဂျက်လေယာဉ်ဖြစ်ဖို့များတယ်။ လေယာဉ်ကြီးနောက်ကို ရောက်တာနဲ့ မီးရှူးမီးပန်းလို ဟာတွေ ပစ်ပြီး ဆန့်ကျင်ဘက် အရပ်ကို မောင်းသွားတယ်။” “အဲဒီနောက် ရှေ့ကလေယာဉ်ပျံကြီး မီးစလောင်တယ်။ နောက်တော့ ပေါက်ကွဲသွားတယ်။ အစအနတွေက ကျနော်တို့ဘက်ကိုတောင် လွင့်လာပြီး သစ်ပင်က သစ်ကိုင်းတွေ တောင် ပြတ်ကျကုန်တယ်။ ကျနော်တို့လည်း စစ်ဖြစ်နေတာလို့ ထင်ပြီး ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်။” မနက် ၆ နာရီတွင် ထိုနေ ရာသို့ ရောက်စဉ်၌ ရဲနှင့် စစ်တပ်မှ ထိုနေရာအား ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့နေသည်ကို တွေ့ခဲ့ရကြောင်းလည်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ထိုစဉ်က မြောက်ရိုဒီရှားကိုလိုနီအစိုးရမှ အဖြစ်အပျက် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်တခုကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုကော်မရှင်သည် အထက်ပါမျက်မြင်သက်သေများအား မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်း မပြုလုပ်ခဲ့သကဲ့သို့ တွေ့ရှိချက်များအား စုံစမ်းရေးကော်မရှင်သို့ သတင်းပို့ကြရန် အများပြည်သူတို့အား ကြေငြာဖိတ်ခေါ်ခြင်းလည်း မပြုလုပ်ခဲ့ပေ။ ထို့အပြင် အများပြည်သူတို့အကြား လေယာဉ်ပျက်ကျမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုမှုများအား သွယ်ဝိုက်သောနည်းများဖြင့် ပိတ်ပင် ခဲ့သည်။ အဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက်သည့် မျက်မြင်သက်သေတချို့ပင် ဖမ်းဆီးထောင်ချခံခဲ့ရကြောင်း မျက်မြင်သက် သေတဦးဖြစ်သည့် အသက် (၇၅) နှစ်ရှိ ဂျွန်ဂွန်ဂို (John Ngongo)က ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဒီစီ-၆ လေယာဉ်၌ စီးနင်းလိုက်ပါလာသော အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒက်ဟမ္မာရှုိူးအပါအဝင် ၁၅ ဦးရှိသည့်အနက် တဦးသာ အသက်ရှင် ကျန် ခဲ့သည်။ ၎င်းမှာ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်း အမေရိကန်တပ်ကြပ်ကြီး ဟာရိုးဂျူလီယံ (Harold Julian) ဖြစ်သည်။ တရားဝင် မှတ်တမ်းများအရ ၎င်းမှာလည်း ရရှိသည့် ဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးသွားခဲ့ရသည်။ သို့သော် ၎င်းအား ကုသခဲ့ရသည့် ဒေါက်တာမာ့ခ်လော်ရင်သယ် (Mark Lowenthal) ကမူ ၎င်းရရှိသည့် ဒဏ်ရာများမှာ ကယ်တင်ကုသ နိုင်သည့် အခြေအနေဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဒေါက်တာမာ့ခ်က “ဒီလောက် ရှည်လျားလှတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆရာဝန် သက်တမ်းမှာ စံတင်လောက်တဲ့ အံ့မခန်း ကုသမှုဆိုင်ရာ ချွတ်ချော်ပျက်ကွက်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမှ မမေ့နိုင်ပါဘူး။ အမေရိကန်တွေ သူတို့နိုင်ငံသားတယောက် ဒဏ်ရာရနေတာကို ဘာကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေး အစီအမံတွေ မလုပ်သလဲ။ ကျောက်ကပ်ယိုယွင်းပျက်စီးပြီး သေမလို ဖြစ်နေတဲ့ သူ့နိုင်ငံသား တယောက်အတွက် ကယ်ဆင်ရေးလေယာဉ် လွှတ်မ ပေးခဲ့တာလဲဆိုတာ အဲဒီ့အချိန်ကတော့ ကျနော် မစဉ်းစားမိခဲ့ပါဘူး။” ဟု သုတေသီ ဗော့ဒါးထံ အီးမေးလ်ဖြင့် အကြောင်း ကြားခဲ့သည်။ ဆက်လက်ပြီး ၎င်း၏ အီးမေးလ်တွင် “ကျနော်ကတော့ နောက်ငါးရက်အကြာမှာ နိုဒါးမြို့က ထွက်ခဲ့ရတယ်။ တပ်ကြပ်ကြီး ဟာရိုးဂျူလီယံက မသေခင်မှာ ဝေဟင်မှာ လျှပ်ပျက်သလို မီးပန်းတွေကို တွေ့လိုက်ရပြီး ပေါက်ကွဲသံ တခုကိုပါ ကြားလိုက်ရကြောင်း ရဲတွေဆီမှာ ထွက်ဆိုသွားတယ်။” ဟု ဒေါက်တာမာ့ခ်က ဆိုသည်။ သုတေသီဗော့ဒါးက ၎င်း၏ သုတေသနစာတမ်းတွင် အတွင်းရေးမှူးချုပ် စီးနင်းလာသည့် လေယာဉ်သည် အဘယ့်ကြောင့် ဆင်းသက်ခွင့် မရဘဲ နိုဒါးလေဆိပ်တွင် အကြိမ်ကြိမ်ပျံဝဲနေရသနည်း။ လောလောလတ်လတ် အသစ်တပ်ဆင်ထားသည့် လေကြောင်း ထိန်း မျှော်စင်၏ အသံဖမ်း တိတ်ခွေမှတ်တမ်း၌ အဘယ်ကြောင့် လေယဉ်ပျက်ကျမှု အဖြစ်အပျက်ကို မှတ်တမ်းမတင် ခဲ့သနည်း။ အဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက်၍ အဘယ်ကြောင့် နောက် ၃၃ နာရီကြာမှ တမ်းတမ်းတင်ခဲ့သနည်းဆိုသည့် အ ချက်များကို မေးခွန်းထုတ်ထားသည်။ထိုမှတ်တမ်းအရ ထိုစဉ်က ရိုဒီရှားနှင့် ညာဆာလန်းဆိုင်ရာ ဗြိတိသျှ မဟာမင်းကြီး ကုဘာ့သ်အယ်ပို့တ် (Cuthbert Alport) သည် အခင်းမဖြစ်ပွားမီညနေ၌ လေဆိပ်သို့ရောက်လာပြီး “အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒက်ဟမ္မားရှိူးဟာ (နိုဒါးလေ ဆိပ်တွင် ဆင်းသက်မည့်) စိတ်ကူးပြောင်းသွားပြီး တခြားတနေရာသို့ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း” ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် လေဆိပ်မန်နေဂျာက တစုံတရာနှိုးဆော်ခြင်း မပြုခဲ့ခြင်းကြောင့် ဝန်ထမ်းများ ပြင်ဆင်မှုမလုပ်ဘဲ အိပ်ရာ ဝင်ခဲ့ကြကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ရေးထားသည်။ ဗြိတိသျှတို့၏ မသင်္ကာဘွယ် ကြံစည်ဆောင်ရွက်မှုများသည် အခင်းမ ဖြစ်ပွားမီ ရက်များစွာကပင် ပြုလုပ်နေကြောင်း မှတ်တမ်းများတွင် တွေ့ရှိရသည်။တရားဝင်အားဖြင့်ဗြိတိသျှတို့သည် ကတန်ဂါအရေးအခင်းတွင် ကုလသမဂ္ဂ၏ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုကို ထောက်ခံခဲ့သော် လည်း နောက်ကွယ်၌မူ ခွဲထွက်ရေးသူပုန်များကို အားပေးထောက်ခံနေသည်။ စေ့စပ်ဆွေးနွေးပွဲများကို နှောက်ယှက်နေ သည်ဟု အတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် ၎င်း၏လက်ထောက်များက ယုံကြည်ကြသည်။ အကြောင်းမှာ ကတန်ဂါရှိ သတ္ထုတွင်း များမှ ဗြိတိသျှတို့၏အကျိုးစီးပွားများနှင့် လူဖြူကိုလိုနီများအား ထောက်ခံ၍ ဖြစ်သည်။စက်တင်ဘာ(၁၃))ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းတွင် ကတန်ဂါ ခွဲထွက်ရေး သူပုန်ခေါင်းဆောင် မွန်ဆီ ရွှန်ဘေ (Moise Tshombe) က ကုလသမဂ္ဂ၏ ကြား ဝင်ဆောင်ရွက်မှုကို လက်ခံလိုက်နာရန် အရိပ်အမြွက်ပြခဲ့သော်လည်း ကတန်ဂါဆိုင်ရာ ဗြိတိသျှကောင်စစ်ဝန် ဒင်ဇယ် ဒွန်းနစ်(Denzil Dunnett)နှင့်တွေ့ဆုံပြီးနောက် ညနေပိုင်းတွင် စိတ်ကူးပြောင်း၍ငြင်းဆန်သွားခဲ့သည်။ဆိုဗီယက်၊ ပြင်သစ်နှင့် ကွန်ဂိုနှင့် ကတန်ဂါကိုလိုနီပိုင်ရှင်ဟောင်း ဘယ်လ်ဂျီယံတို့၏ ဖယ်ကြဉ်မှုကို ခံနေရသော မစ္စတာ ဒက်ဟမ္မာရှိူးသည် ကတန်ဂါသူပုန်များနှင့် ၎င်းတို့တွင် ပါဝင်နေသော ပြည်ပ ကြေးစားစစ်သားများအား တိုက်ခိုက်ရန် မော်သော်စစ်ဆင်ရေး (Operation Morthor) အားဆင်နွှဲရန် ၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် ဗြိတိသျှနှင့်အမေရိကန်တို့ အားဒေါသအမျက် ထွက်စေခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က အမေရိကန်သမ္မတကနေဒီသည် အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အကြီးအကျယ်ဝမ်းနည်းကြောင်း မိမိလည်း ထို့အတူဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒင်းရပ်စ် (Dean Rusk) က ဟမ္မားရှိူး၏ လက်ထောက်တဦးအား ပြောကြားခဲ့သည်။မည်သူက လုပ်ကြံသည်ကို အတိအကျ မသိနိုင်သော်လည်း ခိုင်လုံသော အချက်များအရ အတွင်းရေးမှူးချုပ်မှာ လုပ်ကြံ ခံရခြင်း အသေအခြာပင်ဖြစ်သည်။ ထိုတွေ့ရှိချက်များအရ လုပ်ကြံမှု နောက်ကွယ်၌ အနောက်တိုင်း အင်အားကြီး နိုင် ငံများ ပါဝင်ပါတ်သက်နေကြောင်း သုတေသီဗောဒါးက နိဂုံးကောက်ချက်ချထားသည်။ကွန်ဂိုနိုင်ငံ၏ ပေါကြွယ်ဝသည့် သယံဇာတများနှင့် ၎င်းအပေါ်မှ အနောက်နိုင်ငံများ၏ ကြီးမားသည့် အကျိုးစီးပွားများမှာ အာဖရိကန်လူမည်း လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် အကြီးအကျယ် ခြိမ်းချောက်ခံနေရသည်။ လက်လွတ်ဆုံးရှူံး မည့် အခြေအနေနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ သို့သော် လူဖြူများက ထိုအကျိုးစီးပွားကို အငန်းမရ ဖက်တွယ်ရန် အားထုတ် ကြိုးပမ်းမှုများက ဤလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှု၏ အခြေခံအကြောင်းတရားပင် ဖြစ်သည်။မစ္စတာဒက်ဟမ္မာရှိူးမှာ ကုလသမဂ္ဂ၏ ပဋိညဉ်စာတမ်းနှင့် နိုင်ငံတကာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ယုံကြည်၍ အခိုင်အမာ ရပ်ခံသူတဦးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ကြေးနန်းနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပေးစာများအရ မစ္စတာဟမ္မာရှိူးသည် အင်အားကြီးနိုင်ငံများ၏ ညစ်ကျယ်ကောက်ကျစ်သည့် စရိုက်များကို စက်ဆုတ်စိတ်ပျက်မိကြောင်း ရေးသားထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဤသု တေသနစာတမ်းအရ ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိရသည့် အချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဗြိတိသျှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သမိုင်း ရေးရာ အရာရှိတဦးကမူ ဤစာတမ်းပါ စုံစမ်းတွေ့ရှိချက်များကို တစုံတရာ ဝေဘန်ချက်ပေးရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။(အင်အားကြီးနိုင်ငံများ၏ ညစ်ကျယ်ကျယ်စရိုက်နှင့် ကိုယ်ကျိုးစီးပွား ကာကွယ်ရန် ဘာမဆိုလုပ်တတ်သည့် အမူအ ကျင့်ကို သတိပြုနိုင်ရန်အတွက် အင်္ဂလန်ဂါးဒီယန်းသတင်းစာ (August 19, 2011 ) ၌ ပါရှိသော Julian Borger နှင့် Georgina Smith တို့၏ UNchief’s plane ‘was shot down’ ကိုဆောင်းပါးကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်သည်။)Myanmar Express
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မော်လမြိုင်ကျွန်းနှင့် ဖျာပုံမြို့နယ် မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲများတက်ရောက်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် နှင့်ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှသည် ဇွန် ၂ဝ ရက် နံနက်ပိုင်းက မော်လမြိုင် ကျွန်းမြို့နယ်လမ်းဆုံတွင် တပ်နယ် မိသားစုဝင်များနှင့် မြို့နယ်အဖွဲ့များ ပူးပေါင်း၍ပြုလုပ်သည့် မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ချီးမြှင့် ၍ အထိမ်းအမှတ် သစ်ပင်အား စိုက်ပျိုးပေးသည်။အဆိုပါ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ရုံးမှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလှဌေးဝင်းနှင့်ဇနီး ဒေါ်မာမာဝေ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ရေ ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဥာဏ်ထွန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ဟိန်းနှင့် ဇနီး ဒေါ်ထွေးထွေးညွန့်၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိ ကြီးများ၊ အနောက်တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးနှင့်ဇနီး၊ နယ်မြေခံတပ်ရင်းမှ တပ်မတော် သားများနှင့် မိသားစုဝင်များ၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်မှ ဌာန ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊ အဖွဲ့အစည်း များ၊ မြို့မိမြို့ဖများ၊ ဒေသခံပြည်သူ များ တက်ရောက်ကြသည်။ရှေးဦးစွာ တပ်မတော်ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်သည် သစ်ပင်စိုက် ပျိုးပွဲကျင်းပမည့်နေရာသို့ရောက် ရှိပြီး သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲတက်ရောက် လာကြသူများအား ရင်းရင်းနှီးနှီး နှုတ်ဆက်သည်။ ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီးတို့က မော်လ မြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်၏ မိုးရာသီသစ်ပင် စိုက်ပျိုးပွဲအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကျွန်းပင်အား ဦးဆောင်စိုက်ပျိုးပေး သည်။ ဆက်လက်၍ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှဌေးဝင်းနှင့်ဇနီး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဥာဏ်ထွန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ဟိန်း နှင့် ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများနှင့် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲတက်ရောက်လာ ကြသူများက သတ်မှတ်နေရာအသီး သီးတွင် စိုက်ပျိုးပင်များအား စိုက်ပျိုး ပေးကြသည်။ ယင်းနောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ သည် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲတက်ရောက် လာကြသူများ စုပေါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိုး နေမှုများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှု နှုတ်ဆက်အားပေးကြသည်။ ဇွန် ၂ဝ ရက်က ကျင်းပပြုလုပ်သော မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်၏ မိုးရာသီသစ် ပင်စိုက်ပျိုးပွဲတွင် ကျွန်း၊ ယူကလစ်ပင် အပါအဝင် စုစုပေါင်း ၃၈ဝဝ ပင် စုပေါင်း စိုက်ပျိုးခဲ့ကြသည်။ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်သည် မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ် ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအား မော်တော် ယာဉ်များဖြင့် လှည့်လည်ကြည့်ရှုသည်။ ဆက်လက်၍ တပ်မတော်ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်သည် မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့ နယ် နယ်မြေခံတပ်ရင်းခန်းမတွင် တပ်ရင်းမှအရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစု ဝင်များအားတွေ့ဆုံ၍ သြဝါဒစကား မြွက်ကြားသည်။ သြဝါဒစကာြးွမက်ကြားအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က တပ်ရင်းမိသားစုများအတွက် စာရေး ကိရိယာများနှင့် သုတရသစာစောင် များပေးအပ်ရာ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက လက်ခံရယူသည်။ ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးမှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလှဌေးဝင်းက တပ်ရင်းမိသားစုများအတွက် အားကစား ပစ္စည်းများကိုလည်းကောင်း၊ စစ်ရေးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ဇော်ဦးက ရုပ်မြင် သံကြားဖမ်းစက်များကိုလည်းကောင်း ပေးအပ်ရာ တာဝန်ရှိသူအသီးသီးက လက်ခံရယူကြသည်။ ဆက်လက်၍ တပ်မတော်ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်၏ဇနီးက တပ်ရင်းမိခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းရန်ပုံ ငွေအတွက် ချီးမြှင့်ငွေများပေးအပ်ရာ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက လက်ခံရယူသည်။ တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ သည် အခမ်းအနားတက်ရောက်ကြသူ များအား ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်သည်။ ဆက်လက်၍ တပ်မတော်ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် သာပေါင်းမြို့ နယ်မြေခံ တပ်ရင်းသို့ မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် ရောက်ရှိကြပြီး တပ်ရင်းခန်းမတွင် တပ်ရင်းမှ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစု ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံ၍ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က သြဝါဒစကား မြွက်ကြားသည်။ သြဝါဒစကားမြွက်ကြားအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က တပ်ရင်းမိသားစုများအတွက် စာရေး ကိရိယာနှင့် သုတရသစာစောင်များ ပေးအပ်ရာ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက လက်ခံရယူသည်။ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးမှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလှဌေးဝင်းက တပ်ရင်းမိသားစုများအတွက် အားက စားပစ္စည်းများကိုလည်းကောင်း၊ စစ်ရေး ချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ဇော်ဦးက ရုပ်မြင်သံကြားဖမ်းစက်များကိုလည်း ကောင်းပေးအပ်ရာ တာဝန်ရှိသူအသီး သီးက လက်ခံရယူကြသည်။ ဆက်လက်၍ တပ်မတော်ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်၏ဇနီးက တပ်ရင်းမိခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ရန်ပုံ ငွေအတွက် ချီးမြှင့်ငွေများပေးအပ်ရာ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက လက်ခံရယူသည်။ တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ သည် အခမ်းအနားတက်ရောက်ကြသူ များအား ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်သည်။ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်သည် တပ်ရင်းအတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှုသည်။ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်၊ ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ သည် ဇွန် ၂၁ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ပုသိမ် တပ်နယ် နယ်မြေခံတပ်မတော်ဆေးရုံ တွင် ဆေးရုံတက်လူနာများအား လှည့် လည်ကြည့်ရှု၍ အားပေးစကားများ ပြောကြားသည်။ ရှေးဦးစွာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် နယ်မြေ ခံ တပ်မတော်ဆေးရုံ အမျိုးသားကုသ ဆောင်တွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေကြ သော လူနာများအား လှည့်လည်ကြည့် ရှုအားပေးစကားပြောကြားကာ တပ်မ တော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က စား သောက်ဖွယ်ရာများနှင့် ထောက်ပံ့ငွေ များပေးအပ်သည်။ထို့နောက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလှဌေးဝင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဥာဏ်ထွန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြတ်ဟိန်းနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီး များက ဆေးရုံတက်လူနာများအား အားပေးစကားများပြောကြားကာ စားသောက်ဖွယ်ရာများနှင့် ထောက်ပံ့ငွေ များပေးအပ်ကြသည်။ အလားတူ တပ်မတော်ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်၏ဇနီးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် နယ်မြေခံတပ်မတော်ဆေးရုံ အမျိုးသမီး ကုသဆောင်တွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေ ကြသော လူနာများအားလှည့်လည် ကြည့်ရှုအားပေးစကားပြောကြားကာ စားသောက်ဖွယ်ရာများနှင့်ထောက်ပံ့ငွေ များပေးအပ်ကြသည်။ ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ဆေးကုသခန်းများအား လှည့်လည် ကြည့်ရှုကြရာ တာဝန်ရှိသူတို့က ရှင်းလင်းပြသကြသည်။ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်အား ဆေးရုံတပ်မှူးက ဆေးရုံ ရှိ အဆောက်အအုံအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြရာ တွဲဖက် စစ်ထောက်ချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ခင်မောင်ထွန်းက ဖြည့်စွက်ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က လိုအပ်သည် များ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ဆက်လက်၍ တပ်မတော်ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ဖျာပုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်ဦးစိုးနိုင်နှင့်အတူ ဖျာပုံမြို့နယ် တွင် တပ်နယ်မိသားစုဝင်များနှင့် မြို့နယ် အဖွဲ့များ ပူးပေါင်းပြုလုပ်သည့် မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲအခမ်းအနားသို့ တက် ရောက်ချီးမြှင့်သည်။ပထမဦးစွာ တပ်မတော်ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်သည် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲ ကျင်းပသည့်နေရာသို့ ရောက်ရှိလာပြီး သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲတက်ရောက်လာကြသူ များအား ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်သည်။ ယင်းနောက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် ဇနီးတို့က ဖျာပုံမြို့နယ်၏ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲတော်အဖြစ် ကျွန်းပင်အား ဦးဆောင်စိုက်ပျိုးပေးကြ သည်။ ဆက်လက်၍ တပ်မတော်ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်၏ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် သစ်ပင် စိုက်ပျိုးပွဲတက်ရောက်လာကြသူများက သတ်မှတ်နေရာအသီးသီးတွင် စိုက်ပျိုး ပင်များအား စိုက်ပျိုးပေးကြသည်။ ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲတက်ရောက်လာကြသူ များ စုပေါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိုးနေမှုများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုနှုတ်ဆက်အားပေး ကြသည်။ဇွန် ၂၁ ရက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ် သော ဖျာပုံမြို့နယ်၏ မိုးရာသီသစ်ပင် စိုက်ပျိုးပွဲတွင် ကျွန်း၊ ယူကလစ်၊ အော် ရေးရှား၊ မဟော်ဂနီအပါအဝင် စိုက်ပျိုး ပင်စုစုပေါင်း ၂၁၅၇ ပင် စုပေါင်းစိုက်ပျိုး ခဲ့ကြသည်။ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် သည် မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်နှင့်ဖျာပုံ မြို့နယ်တို့၏ မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲ တွင် အမှာစကားပြောကြားရာ၌"ဧရာ ဝတီတိုင်းဒေသကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စပါးကျီဖြစ်သကဲ့သို့ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပတ် သက်၍ အဓိကထားလုပ်ဆောင်နေရ သောဒေသဖြစ်ကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး အောင်မြင်ရန်အတွက် ရာသီဥတုမှန်ဖို့ လိုအပ်သလို သစ်ပင်၊ သစ်တောများ၊ ချောင်း၊ မြောင်းစသည့် သဘာဝတရား များ မှန်ကန်ဖို့လိုကြောင်း၊ ယခင်က လမုပင်များ အပါအဝင် ဒီရေတောများ ပေါများခဲ့သည့် ဒေသဖြစ်သော်လည်း ယခုအခါတွင် ရာသီဥတုကို အထောက် အကူဖြစ်စေသော သစ်ပင်များနည်းပါး ၍ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်တွင် နာဂစ်မုန်တိုင်း ဒဏ်ကိုခံခဲ့ရကြောင်း၊ နာဂစ်မုန်တိုင်း သည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးကို တွန်း အားဖြစ်စေခဲ့ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးစေရန် နှင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း အထောက် အကူပြုစေရန်အတွက် တပ်မတော်သား များ၊ မိသားစုဝင်များပါ ပါဝင်၍ ယခု ကဲ့သို့ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲတော်အား ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သစ်ပင် သစ်တောပြုန်းတီးမှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်မှ သာ သဘာဝဘေးအနရ္တာယက်ိုအထကိုအလျောက်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး သည် စိုက်ပျိုးရေးဒေသဖြစ်သဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအား အဓိကအောင် မြင်အောင် လုပ်ဆောင်ရန်လိုကြောင်း၊ ထို့အပြင် ဌာနဆိုင်ရာများကလည်း ဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးကြရန်လိုကြောင်း၊ ဒေသကို မူလအခြေအနေရောက်ရှိ အောင် အားလုံးက ညီညွတ်စွာဖြင့် ကြိုး စားလုပ်ဆောင်ရန် လိုကြောင်းဖြင့် " ပြော ကြားသည်။ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်သည် ဖျာပုံမြို့၏ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုများအား မော်တော်ယာဉ်များ ဖြင့် လှည့်လည်ကြည့်ရှုသည်။ ဆက်လက်၍ တပ်မတော်ကာ ကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ဖျာပုံမြို့ နယ်မြေခံတပ်ရင်းခန်းမတွင် တပ်ရင်းမှ အရာရှိ/ စစ်သည်များနှင့် တွေ့ဆုံ၍ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီး ချုပ်က သြဝါဒစကာြးွမက်ကြားသည်။ သြဝါဒစကာြးွမက်ကြားအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က တပ်ရင်းမိသားစုများအတွက် စာရေး ကိရိယာများနှင့် သုတ၊ ရသ စာစောင် များပေးအပ်ရာ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက လက်ခံရယူသည်။ ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလှဌေးဝင်း က တပ်ရင်းမိသားစုများအတွက် အား ကစားပစ္စည်းများကိုလည်းကောင်း၊ စစ် ရေးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ဇော်ဦးက ရုပ်မြင်သံကြားဖမ်းစက်များကိုလည်း ကောင်း ပေးအပ်ကြရာ တာဝန်ရှိသူ အသီးသီးက လက်ခံရယူကြသည်။ ဆက်လက်၍ တပ်မတော်ကာ ကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ဇနီးက တပ်ရင်းမိခင် နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ရန် ပုံငွေအတွက် ချီးမြှင့်ငွေများပေးအပ်ရာ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကလက်ခံရယူသည်။တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ သည် တွေ့ဆုံပွဲတက်ရောက်သူများ အား ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်ကြသည်။ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် သည်အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နယ်မြေအတွင်း တပ်နယ်မိသားစုများ နှင့် တွေ့ဆုံ၍ သြဝါဒြွမက်ကြားရာ၌"တပ်မတော်သည် အမိန့်နာခံမှုနှင့် စည်း ကမ်းကောင်းမွန်မှုကို အခြေခံထား ကြောင်း၊ အဆင့်ဆင့်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ သူများအနေဖြင့် မှန်ကန်သောဦးဆောင် မှု ပေးနိုင်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်မှ အစပြု၍ တပ်မှူးအဆုံး ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ရန်လိုသလို နောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်ရန်လိုအပ် ကြောင်း၊ အဆင့်လိုက်မိမိတာဝန်ကို သိရှိနားလည်ပြီး မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြင့် ကျေပွန်အောင် လုပ်ဆောင်ရန်လို ကြောင်း၊ မိမိကိုယ်ကို တိုးတက်ကောင်း မွန်အောင်ကြိုးစားရန်လိုအပ်သလို မိမိ တပ်ကိုလည်း စေတနာထားပြီးကောင်း အောင်လုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ မြစ်ဝ ကျွန်းပေါ်ဒေသသည် အရိပ်ရလေကာ ပင်များ နည်းပါးသည့်အတွက် သဘာဝဘေးဒဏ်ခံခဲ့ရကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ တပ် မိသားစုဝင်များအနေဖြင့် အရိပ်ရလေ ကာပင်ကို ထုနှင့်ရအောင် စိုက်ရန်လို အပ်ကြောင်း၊ ရာသီဥတုဒဏ်ကို ထိန်း သိမ်းနိုင်ရန်အတွက် သစ်ပင်များများ စိုက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ သဘာဝကို လူတို့၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုဖြင့် ဖန်တီး ပြီးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ အလုပ် လုပ်ခြင်းဖြင့် တိုးတက်မှုရှိမှသာ မိမိ၏ လက်အောက်မှ ယုံကြည်မှုရရှိလာမည် ဖြစ်ပြီး အားကိုးခံရသလို အထက်က အားထားရသည့် တပ်ဖြစ်လာမည်ဖြစ် ကြောင်း၊မည်သည့်နေရာဒေသတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည်ဖြစ်စေ ကြိုး ကြိုးစားစား တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်လို ကြောင်း၊ အမျိုးမျိုးသော ပြောဆိုလှုံ့ ဆော်နေကြသည်များကို ဆင်ခြင်တုံ တရားရှိစွာဖြင့် မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ရန်လိုကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးအခြေ အနေကို မှန်မှန်ကန်ကန်သိရှိအောင် ပြုလုပ်ပြီး လက်အောက်အထိ အခြေ အနေမှန်များ သိရှိရန်အတွက် ရှင်းလင်း ပြရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ အရည်အချင်းရှိ သောတပ်မတော်ဖြစ်ရန်အတွက်အချင်း ချင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီး လက်တွဲ ခေါ်ယူရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ အဆင့်နှင့် လျော်ညီသော သင်တန်းများအား တက်ရောက်ပြီးဖြစ်၍ ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ ပြန်လည် သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးမှသာ အချင်းချင်းပြည့်ဝလာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်မတော်တွင် မိသားစုဝင်များအား မူလတန်းမှစ၍ တက္ကသိုလ်အဆင့်ထိ ပညာသင်ကြားပေးနေသကဲ့သို့ စစ် သည်များအားလည်း ပညာရေးကျောင်း များဖွင့်၍ သင်ကြားပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ အတန်းပညာတတ်မြောက်ရန်လိုအပ် သလို နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများကို လည်း လေ့လာရန်လိုကြောင်း၊ သို့မှ သာ လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးလာပြီး စွမ်းရည်ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့ အချိန်အခါတွင် မှီခိုသူ သား၊ သမီးများ အပါအဝင် စစ်သည်အဆင့်အတန်း အားလုံးကို တာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်က အတန်းပညာကအစ အတတ်ပညာမြင့် မားအောင် သင်ကြားပေးနေမှုများကို တွန်းအားပေးကြရန်လိုကြောင်းဖြင့်"အကျယ်တဝင့်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။Myanmar Express
ယခုလအတွင်း Debit Card များ စတင်သုံးစွဲနိုင်ရန်စီစဉ်
From : ထွန်းထွန်း ဇွန်လအတွင်းမှစတင်ကာ Debit Card များကိုသုံးစွဲနိုင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ နေပြည်တော်၌ ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့ကကျင်းပသည့် ဘဏ်များကြီးကြပ်ရေးကော်မတီက ကြီးမှူးဖွင့်လှစ်သော မြန်မာနိုင်ငံ ဘဏ်သင်တန်းကျောင်း (နေပြည်တော်) ၏ အထွေထွေဘဏ်လုပ်ငန်းသင်တန်း၊ အမှတ်စဉ် (၃) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားတွင်ဘဏ်များကြီးကြပ်ရေးကော်မတီနာယက ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလှထွန်းက အဆိုပါအချက်ကို ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ယခုလမှစတင်ကာ Debit Card များကို သုံးစွဲနိုင်စေရန်အတွက် လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း Myanmar Payment Union ကိုတည်ထောင်ပြီး ပထမအဆင့်တွင် Intra Bank Network တည်ထောင်ခြင်း ဒုတိယအဆင့်တွင် Inter Bank Network တည်ထောင်ခြင်းနှင့် တတိယအဆင့်တွင် International Linkage လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး က ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများအနေဖြင့် ၁.၁၁.၂၀၁၁ ရက်မှစတင်ကာ ပုဂ္ဂလိကဘဏ် (၆) ဘဏ်မှ အလိုအလျောက်ငွေထုတ်စက်များဖြင့် ငွေထုတ်ပေးမှုဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုများပေးနိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့် ၁.၄.၂၀၁၂ ရက်နေ့မှစတင်ကာ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း ပေါင်းစည်းခြင်းလုပ်ငန်း၏ ပထမခြေလှမ်းအဖြစ် ထိန်းကျောင်းမှုရှိသည့် နှုန်းရှင်ငွေလဲလှယ်နှုန်းစနစ်ကိုကျင့်သုံးခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ် (၁၇) ဘဏ်ကိုလည်း နိုင်ငံခြားငွေများ ၀ယ်ယူရောင်းချ လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်များ ထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံခြားသားများ၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ၊ ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံသားများ နိုင်ငံခြားသုံးငွေများ လွယ်ကူစွာလဲလှယ်သုံးစွဲနိုင်စေရန် ဘဏ်များ၊ လေဆိပ်များ၊ ဟိုတယ်များ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများနှင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ အများဆုံးသွားရောက်နိုင်သည့်နေရာများတွင် နိုင်ငံခြားငွေများ ၀ယ်ယူရောင်းချသည့်ကောင်တာများ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ရာ ယနေ့အချိန်အထိ Money Changer Counter ၆၂ ခုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများနေဖြင့် ပြည်တွင်းရှိမိသားစုများထံ ငွေလဲပေးပို့မှုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် Money Changer လိုင်စင်ရ ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်လေးခုကို စင်ကာပူ၊ ထိုင်း၊ မလေးရှားနိုင်ငံများတွင် ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။Myanmar Express
အကြိမ်ရေအကန့်အသတ်မရှိ ငွေဖြည့်သွင်းနိုင်မည့် Reloadable Virtual Visa Card များ ပြည်တွင်း၌ စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီ
From : ထွန်းထွန်း အင်တာနက်ပေါ်ရှိ Visa Card ဖြင့် ငွေပေးချေမှုလက်ခံသော ၀က်ဘ်ဆိုက် များတွင် ငွေပေးချေနိုင် ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ထားသည့် Reloadable Virtual Visa Card များ ပြည်တွင်း၌ စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါဆောင်ရွက်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်သည့် Shwe Money မှတာဝန်ရှိသူကပြောသည်။၎င်းဆောင်ရွက်ချက်ကို www.shwemoney.com မှတစ်ဆင့် မှတ်ပုံ တင်ကာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ Shwe Money Virtual Visa Card မှာ Debit Visa Card အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ၎င်းကတ်အတွင်းသို့ အသုံးပြုလိုသည့် ငွေပမာဏအား ကြိုတင် ထည့်ပေးထားရန်လိုအပ်ကြောင်း မြန်မာကျပ်ငွေမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့် အကြိမ်ရေအကန့်အသတ်မရှိ အလွယ်တကူဖြည့်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိပြည်တွင်း၌ Virtual Visa Card အမျိုးအစားအချို့ကို ရောင်းချလျက်ရှိသော်လည်း Shwe Money မှာ Reloadable ဖြစ်၍ အကြိမ်ကြိမ်ငွေဖြည့်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “ပထမတစ်ကြိမ် Virtual Visa Card လျှောက်ပြီးတာနဲ့ နောက်ထပ်အကြိမ်ကြိမ် ထပ်မံဖြည့်သွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀ ကနေ အများဆုံးတစ်ထောင်အထိ ဖြည့်သွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်ထောင်ကို အများဆုံးသတ်မှတ်ထားပေမယ့် တစ်ထောင်ထက်ပိုပြီး ဖြည့်သွင်းချင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ Shwe Money ကို အကြောင်းကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု အထက်ပါတာဝန်ရှိသူက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိ Visa Card Payment လက်ခံသော မည်သည့် ၀က်ဘ် ဆိုက်တွင် မဆို ဈေးဝယ် ယူခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ကတ်၏သက်တမ်းမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်နှစ်ဖြစ်ကြောင်း၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါက နောက်ထပ်ငါးကြိမ်အထိ ထပ်မံသက်တမ်းတိုးနိုင်ကြောင်း သိရသည်။Myanmar Express
From : နိရဉ္စရာနိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေသစ် ပေါ်ထွက်လာပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အနောက် နိုင်ငံများ သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အများဆုံး ထိပ်တန်းနိုင်ငံများ ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာနမှ အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများက ပြောသည်။ ဇွန်လ ၂ဝ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ ပတ်ခ်ရွိုင်ရယ် ဟိုတယ်တွင် စတင်ကျင်းပသော ‘မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ထိပ်သီးအစည် အဝေး’ တွင် ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။“မကြာမီ နှစ်တွေ အတွင်းမှာပဲ အနောက်နိုင်ငံတွေက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ထိပ်တန်းစာရင်းဝင်နိုင်ငံတွေ နေရာမှာ အစားထိုး ဝင်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်” ဟု စီမံ/စီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ကံဇော် က ဆိုသည်။ဥရောပ၊ သြစတြေးလျ၊ ကနေဒါနှင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတို့မှ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုများကို ရုတ်သိမ်းလိုက် ပြီးနောက် အမေရိကန်အစိုးရအနေဖြင့် အမေရိကန် ကုမ္ပဏီများအား မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် တိုက်တွန်းပြောကြားထားသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင် အနောက်နိုင်ငံများက အများဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့်နိုင်ငံများ ဖြစ်လာမည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ထိုသို့ အနောက်နိုင်ငံများက နေရာယူလာဖွယ် ရှိသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျက်ရှိသော တရုတ်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် အဓိကကျသော နေရာများတွင်သာ ဆက်လက်ရပ်တည်နေဖွယ် ရှိသည်။“အနောက်နိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ဝင်လာဖို့ ရှိပေမယ့် အစောပိုင်းကတည်းက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်လာတဲ့ အိမ်နီးချင်း တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတွေက တခြားနိုင်ငံတွေထက် စာရင် မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး အခြေအနေတွေကို ပိုမိုနားလည် ကျွမ်းဝင်မှု ရှိပြီး ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့လည်း ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်ဖို့ အဆက်အသွယ်တွေ ရှိပြီးဖြစ်လို့ ပိုပြီး လုပ်သာကိုင်သာ ရှိပါလိမ့်မယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်ဇော်မောင် က ဆိုသည်။နှစ်ရက်ကြာ ကျင်းပသော နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ညီလာခံသို့ အနောက်နိုင်ငံများ ဖြစ်ကြသော အမေရိကန်၊ ဂျာမဏီ၊ ပြင်သစ်၊ ကနေဒါ၊ ဗြိတိန်၊ အီတလီ၊ နော်ဝေ၊ သြစတြေးလျတို့ အပြင် အာရှနိုင်ငံများ ဖြစ်သော အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု (ယူအေအီး)၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ စင်္ကာပူ။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ကိုရီးယား၊ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဗီယက်နမ်၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ မွန်ဂိုလီးယား၊ လာအို၊ သီရိလင်္ကာနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံတို့မှ ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်လာကြသည်။ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်သော နိုင်ငံများတွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ထိပ်ဆုံးမှ ရပ်တည်နေပြီး ၎င်းနောက်တွင် ထိုင်း၊ ဟောင်ကောင်နှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အများဆုံး နိုင်ငံများ ဖြစ်နေသည်။ထိုသို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်သော စုစုပေါင်း ၃၁ နိုင်ငံတွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၃ ဒဿမ ၉၄၇ ဘီလီယံဖြင့် စုစုပေါင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ ၃၄ ဒဿမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး ထိုင်းနိုင်ငံက ၉ ဒဿမ ၅၆၈ ဘီလီယံဖြင့် ဒုတိယလိုက်သည်။ ဟောင်ကောင်မှ ၆ ဒဿမ ၃ဝ၈ ဘီလီယံ၊ တောင်ကိုရီးယားမှ ၂ ဒဿမ ၉၃၈ ဘီလီယံ၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ ၂ ဒဿမ ၆၅၉ ဘီယံယံနှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ ၁ ဒဿမ ၈၁၈ ဘီလီယံ အသီးသီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ထားကြသည်။၂ဝ၁၂ ခုနှစ် မတ်လ အထိ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏသည် စုစုပေါင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄ဝ ဒဿမ ၆၉၉ ဘီလီယံ ရှိသည်။ယခု အသစ်ရေးဆွဲထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေသစ်အရ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် ကုမ္ပဏီများနှင့် ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများသည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ၅ နှစ်နှင့် ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်လုပ်ကိုင်ခွင့် နှစ် ၇ဝ အထိ ခွင့်ပြုပေးမည် ဖြစ်သည်။နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေသစ်ကို မေလ ၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသွားသော လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း အချို့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက ဥပဒေပါ အသေးစိတ် အချက်အလက် ကို ထပ်မံ ဆွေးနွေးလိုသောကြောင့် ဇွန်လိုင်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည် စတင်မည့် လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးအတည်ပြုနိုင်ဖွယ် ရှိသည်။ Myanmar Express
အတိုက်အခံမီဒီယာများကို ၁၀၁ ကြိမ်မြောက် စိတ်ပျက်ခြင်း
ရက်နေ့က DVB က ပြည်တွင်းသတင်းထောက်ကျတော်ကို တယ်လီဖုန်းနဲ့ အင်တာဗျူး လုပ်တယ်... ကျတော်က ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ယခုလက်ရှိ မီးရှို့ ဖျက်ဆီးမှုတွေ လုပ်နေသူတွေဟာ ပြည် တွင်းနေ အစ္စလမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သူ နိုင်ငံသားတွေ မဟုတ်ကြောင်း၊ ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာတွေသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်တွင်းထုတ် 7Day News လို ဂျာနယ်မှာတောင် ဘင်္ဂလီ လို့သုံးနှုန်းကြောင်း၊ ကျတော်လဲ အင်တာဗျူး ဖြေရာမှာ ဘင်္ဂလီ (သို့) ရိုဟင်ဂျာ (သို့) ကုလား လို့သာ သုံးနှုန်းပေးနိုင်မယ် လို့ အင်တာဗျူး မစခင် ကြိုပြောခဲ့တယ်... အင်တာဗျူးမှာ ကျတော်က ဘင်္ဂလီ လို့ သုံးပြီးဖြေလိုက်တဲ့အတွက် အဆိုပါ အင်တာဗျူးကို ထုတ်လွှင့်မှာ မဟုတ်ကြောင်း ဆပ်အယ်ဒီတာ ဦးသန်းဝင်းထွဋ်က အကြောင်းကြားလာ တယ်...ကျတော်က စဉ်းစားတယ်၊ မီဒီယာဆိုတာဘာလဲ၊ အမျိုး.ဘာသာ.သာသနာ ကိုစောင့် ရှောက်ရမယ့် ထိပ်တန်းအရေးပါသူတွေပဲ၊ ... ရှေးယခင်က ဗုဒ္ဓဘာသာ နေလိုလလို ထွန်းတောက်ခဲ့ တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ယခုအခါ ကုလားဗလီတွေက လက်ညိုးထိုးမလွဲရှိနေပြီ၊ စစ်တွေမြို့မှာ ဒေသခံ ရခိုင်တွေဟာ အင်မတန်တောင့်ခံနိုင်လို့သာ စစ်တွေဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော်ပါလားဆိုတဲ့ အ သိရှိနိုင်သေးတာပါ... အစိုးရအပါအ၀င် ကျွမ်းကျင် သမိုင်းပညာရှင်တွေက ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ ပြည်တွင်း စိမ့်ဝင်မှုနဲ့၊ ပြည်တွင်းတိုင်းရင်းသား မဟုတ်ကြောင်း ထပ်တလဲလဲ ပြောကြားနေပါရဲ့၊ မီဒီ ယာတွေက ဘာကြောင့် ရိုဟင်ဂျာ ကို အကာအကွယ်ပေးနေတာလဲ...မည်းမည်းလှုပ်နေတဲ့ ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာ တွေဟာ စစ်တွေမြို့ပြင် မှာ နှစ်သိန်းကျော် ရှိနေတယ်... စစ်တွေ မြို့သားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ မိသားစု အသုဘတွေကိုတောင် စစ်တွေမြို့ပြင် မန်စီသချိုင်းကို သွားမပို့ရဲကြဘဲ ရှိနေတယ်... ဒါတွေကို ကျတော် သွေးထိုးတဲ့ အ နေနဲ့ ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး... အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အတွက် ပြောတာပါ... အားလုံးရဲ့ အမြင်မှာ တုတ်တွေ၊ ဒါးတွေ ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေကို ကိုယ်တိုင်မျက်မြင် မဟုတ်ဘဲ ဓါတ်ပုံအနေနဲ့ တွေခဲ့ရင် ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာတွေကို သနားစရာ အဖြစ် မြင်ကြမယ်... တကယ်တော့ ဘာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမှ မရှိဘဲ အသေအကျေပေါင်းများစွာနဲ့ အထိနာ ခဲ့ရတာ ရခိုင်လူမျိုးတွေပါ... ဒေသခံရခိုင်တွေရဲ့ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေကြားထဲမှာ ဘင်္ဂလီ ရို ဟင်ဂျာတွေက တဲထိုးပြီးနေကြပါတယ်၊ ကြာလာတော့ ရခိုင်ရပ်ကွက်ကြီးတွေထဲ၊ ရွာကြီးတွေထဲ မှာ ဘင်္ဂလီတွေက ကွက်ကြားသဘောမျိုး သုံးလေးအိမ်စ နေရာတိုင်း၊ ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ ရှိနေတယ်...အခု ပြသနာတွေ ဖြစ်ပွားချိန်မှာတော့ ဘင်္ဂလီတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် စုတ်ပြတ်နေတဲ့ နေအိမ်တွေကို ဆီအပြည့်နဲ့ မီးတိုက်ပစ်လိုက်တယ်... ဒီအခါမှာ ရခိုင်အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်း၊ရပ်ကွက်ကြီး၊ ရွာကြီးတွေဟာ မီးဟုန်းဟုန်းတောက်ပြီး ပြာအတိဖြစ်သွားတော့တာပဲ... ဘင်္ဂလီတွေ နေတဲ့ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေရှိတဲ့ ရပ်ကွက်တွေ၊ ရွာတွေကတော့ လုံခြုံပါတယ်... စစ်တပ် ကလဲ လုံခြုံရေးအပြည့် ယူပေးထားပါတယ်... ကျတော် ဒီစကားတွေကို အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အတွက် ရိုးရိုးသားသားပြောတာပါ...Myanmar Express
ဤ သို့သော ၀ါဒ ဖြန့်မှုကြောင့် မြန်မာအမျိးကောင်းသမီး များသတိရှိစေလို....
မြန်မာပြည်တွင် အစ္စလန်ဘာသာပြန့်ပွားရန် များစွာအလားလာရှိသည်။အစ္စလန်သာသနာများစွာတိုးတက် စေရန် အလွယ်ကူဆုံးနှင့် အသေချာဆုံးသောနည်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးများကို သိမ်းပိုက်ရန် ဖြစ်သည်။အလုပ်အကိုင်အဆင်မပြေသော မူဆလင်ဘာသာဝင်တို့သည် မြန်မာပြည်သို့သွားကာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုပြီးလျှင် မြန်မာအမျိုးသမီးများကိုယူခြင်းဖြင့်အစ္စလန်ဘာသာဝင်ပြန့်ပွားစေရန် အားထုတ်သင့်သည်။ မြန်မာမများတွင်ကိုယ်ကျင့်တရားနည်းပြီး စောင့်စည်းမှုမရှိသောကြောင့် သိမ်းပိုက်ခြင်းဖြင့်သေချာလွယ်ကူသော အစ္စလန်သာသနာပြုနည်းကို သုံးရန်သင့်ပေသည်။အို……. အစ္စလန်ဘာသာဝင်အပေါင်းသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ကျွန်ုပ်တို့လူမျိုးများ အားလုံးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသည်အဆိပ်ပင်ဖြစ်ခဲ့ချေပြီ။ တတ်နိုင်သလောက်ခြေကုတ်ယူထားရပေမည်။သည့်အတွက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့လူမျိုးများအာလုံး စည်းလုံးကြရမည်။သွေးစည်းကြရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သည်နိုင်ငံမှအပြီးအပိုင်ထွက်ခွာသွားရသည့်တိုင်အောင် ကျွန်ုပ်တို့၏ သွေးသားများသည်သည်နိုင်ငံတွင်ကျန်ရစ်ခဲ့ရမည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးတို့သည်အချိန်မရွေးငွေပေးလျှင်ရသော ပြည်တန်ဆာမများကဲ့သို့ဖြစ်နေပြီးကျွန်ုပ်တို့အားလုံး လှုပ်ရှားဖို့အကောင်းဆုံးအချိန် ဖြစ်ပေသည်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးတို့အား သင်တို့၏နှလုံးသားဖြင့်၎င်း၊ငွေအားဖြင့်၎င်း မြူဆွယ်သိမ်းသွင်းရပေမည်။ အဓိကအချက်မှာသူတို့၏ကိုယ်ထဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏သွေးသားများကျန်ရစ်နေဖို့ပင်ဖြစ်ပေသည်။သင်တို့၏ ကြိုးစားသမျှအမြတ်ကား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်၏ရင်တွင်းသို့ မိမိ၏သွေးသားဝင်ရောက်ကိန်းအောင်းသွားအေင် လုပ်နိုင်သူအားဗလီမှ ကူပံ့ငွေ(၅၀၀၀)ဆုအဖြစ်လက်ဖွဲ့ပေးမည်။ ထို့ပြင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီး လေးယောက်၏ကိုယ်တွင်းသို့သင်တို့၏သွေးသားများသွင်းနိုင်ခဲ့ပါကဗလီမှလစဉ်(၁၀၀၀)ပေးသွားပါမည်။ဘွဲ့ရဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးဖြစ်ကဆုငွေ(၂၀၀၀၀)၊ အစိုးရအရာရှိသမီးဖြစ်ပါက ဆုငွေ(၂၀၀၀၀)၊အစိုးရအရာရှိသမီးဖြစ်သည့်အပြင် ဘွဲ့ရပညာတတ်ဖြစ်ပါက ဆုငွေ(၅၀၀၀၀)တိတိကိုဆုအဖြစ် လက်ဖွဲ့ပေးမည်။လူကိုလူဖြင့် ပျိုးရန် သင်တို့အားလုံး အထူးသတိပြုရမည်။သည်လိုသိမ်းသွင်းနိုင်မှသာ အစ္စလန်ဘာသာသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်အဓွန့်ရှည်ကြာမည်ဖြစ်ပါသည်။ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအတွက်သင်တို့ဘာမှပူစရာမရှိပါ။ အစ္စလန်ဘာသာဝင်ဖြစ်သောမူဂျာရစ်အစိုးရမှနှစ်စဉ် တစ်နှစ်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက်စတာလင်ပေါင်တစ်သန်းကို ကျွန်ုပ်တို ကလက်ဝယ်သို့ပေးနေပါသည်။(သင်တို့အောင်မြင်မှုအတွက် အလိုရှိပါလျှင် ဗလီများနှင့် အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပါ။)(မိုဟာမက်အလီစပက်)(နှစ်၂၀အတွင်းံတွဲမြို့သည်မူဆလင်ဘာသာဝင်များသာဖြစ်ရမည်။ဗလီမှမူဆလင်လူငယ်များအားဖြန့်ဝေသည်။)Myanmar Express
ရခိုင်ပြည်နယ်က အရေးအခင်းမှာတော့ ပြည်ပမီဒီယာတွေကလွဲရင် နိုင်ငံသားအားလုံး ကိုယ်စီကိုယ်ငှ တာဝန်ကျေ
အခု ရခိုင်ပြည်နယ်က အရေးအခင်းမှာတော့ ပြည်ပမီဒီယာတွေကလွဲရင်နိုင်ငံသားအားလုံး ကိုယ်စီကိုယ်ငှ တာဝန်ကျေခဲ့ကြပါတယ်။ အရင်ကအရေးအခင်းတွေအားလုံးမှာ စစ်တပ်ကပဲ အကြမ်းနည်းနဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့ပေမယ့် အခုတကြိမ်မှာတော့ အစိုးရကအရေးပေါ်အခြေအနေကြေငြာပြီး စစ်တပ်ကိုကိုင်တွယ်ခိုင်းတာတောင်မှဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဖက်က လက်နက်ကိုင်ပြီးဝင်လာတဲ့ သူတွေကို တိုက်ခိုက်တာလွဲရင်မြို့ရွာတွေအတွက်လုံခြုံရေးယူခဲ့ယုံသက်သက်ပါပဲ။ အခုအရေးအခင်းမှာ စစ်တပ်ကသူ့အလုပ်သူလုပ်သွားပြီး တာဝန်ကျေခဲ့ပါတယ်။ မြို့ရွာတွေက အရေးအခင်းတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့တွေကသာ ကိုင်တွယ်ခဲ့ပြီး အင်အားမလုံလောက်လို့အပျက်အစီးများခဲ့တာကလွဲရင် အရင်တုန်းကလို ပစ္စလက္ခ မပစ်ခဲ့လို့လူအသေပျောက်နှုန်းနည်းခဲ့ပြီး EU ကတောင် အခုအရေးအခင်းမှာ အစိုးရရဲ့သတိကြီးကြီးနဲ့ ကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့မှုကို အသိအမှတ်ပြုချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။ ၈၈'မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ ကိုကိုကြီး၊ ကိုမြအေးတို့ကဘင်္ဂလီရိုဟင်ဂျာကိုလုံးဝလက်မခံခဲ့ကြပဲ ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသလို ပြည်တွင်းကဘာသာခြားတွေကိုလည်း ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအမျိုးသားရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုစည်းရုံးနိုင်ခဲ့တာကလည်းအသိအမှတ်ပြု ချီးကျူးစရာကောင်းပါတယ်။ NLD အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း Statementsကိုယ်စီထုတ်ပြီး အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ NLDလိုအင်အားကြီးပါတီက Statement ထုတ်တဲ့အချိန်မှာသာမန်ကာသျှံကာထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး ကျနော်အပါအဝင် တော်တော်များများစိတ်ပျက်အားလျော့ခဲ့ကြပေမယ့် ILO Conference အပြီးမှာကျင်းပခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ "တိုင်းပြည်မှာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးဟာအရေးကြီးပါတယ်။ နိုင်ငံသား ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ တိကျရှင်းလင်း ပြတ်သားတဲ့နိုင်ငံသား ဖြစ်ပိုင်ခွင့် ဥပဒေက စပြီး လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီမှာ ပြောလိုတာကလက်တွေ့ ပြဿနာ အနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်က ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအထင်ပြောရမယ်ဆိုရင် ပြဿနာ ဖြစ်ပေါ်တာကတော့ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ဝင်ရောက်မှုကို ထိမ်းချုပ်နိုင်မှု အားနည်းပါတယ်။ ရခိုင်နယ်စပ်မှာ တစ်ဖက်က တရားမဝင် ဝင်ရောက်နေထိုင်သူတွေ ဝင်ရောက်နေမယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ လာဘ်စားမှုကင်းတဲ့ နယ်စပ် လူဝင်မှုကိုကြီးကြပ်ထိမ်းသိမ်းရေးကို လိုအပ်နေပါတယ်။" .. လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ လူတွေကို နိုင်ငံသားအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုဖို့တောင် ရှင်းလင်းတဲ့ ဥပဒေလိုအပ်တယ် .. တိကျတဲ့ စနစ်လိုအပ်တယ် ဆိုတာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြေကြားအပြီးမှာတော့ရိုဟင်ဂျာအရေး ရှေ့နေလိုက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံး ကျွမ်းပြန်ကုန်သလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သူ့ပါတီရဲ့ Statement ကို အားမလိုအားမရဖြစ်နေတဲ့ကျနော်တို့ကိုလဲ ပြန်လည်တက်ကြွစေခဲ့ပါတော့တယ်။2...နောက်ထပ်တာဝန်ကြေခဲ့တာတော့ Eleven Media Group၊ The Voiceတို့အပါအဝင် ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေအားလုံးဖြစ်ပြီး သူတို့က သတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးခဲ့ကာ နိုင်ငံတကာကိုပြန့်နေတဲ့ သတင်းမှားတွေကိုတန်ပြန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးကျေးဇူးတင်ရမှာကတော့ Facebook ကို အသုံးပြုနေတဲ့တက်ကြွလူငယ်တွေပါပဲ။ အမျိုးချစ်တဲ့သူတွေ လူငယ်တွေဟာ မြန်မာပြည်ပြင်ပကဒေါ်လာစားမီဒီယာတွေက ဘင်္ဂလီခေါ်တောအရေးကို မဟုတ်မဟပ်လုပ်ကြံဇါတ်တွေခင်းနေကြတာကို တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့၊ အမှန်တရားကို ပြသနိုင်ဖို့အတွက်စာအုပ်တွေ သမိုင်းကြောင်းတွေကိုလှန်လျောပြီး Facebook မှာ Postတွေရေးကြတယ်။ Share ကြတယ်။ ရေးကြတဲ့သူအများကြီးရှိပေမယ့်အားလုံးရဲ့ဦးတည်ချက်က တစ်ခုတည်းပါပဲ။ အဲဒါကတော့ ဒီဘင်္ဂလီရိုဟင်ဂျာဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ဘူး၊ မြန်မာလူမျိုးစုထဲမှာမပါဝင်ဘူးဆိုတာကို မသိသေးတဲ့သူတွေသိအောင် နဲ့ ကမ္ဘာကနေ လက်ရှိ ရှိနေတဲ့အစိုးရကိုဖိအားပေးပြီး နိုင်ငံမဲ့တွေကို လူမျိုးစု စာရင်းထဲ ထည့်ခံရမှာကြောက်ကြလို့ပါပဲ။သူတို့တတွေဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အပြင်မှာ မတွေ့ဖူး စကားမပြောဖူးကြသလို၊ နေရပ်တွေက ကွဲပြားပြီး အယူအဆတွေကလည်း တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးမတူကြပေမယ့် ဒီ ဘင်္ဂလီရိုဟင်ဂျာအရေးမှာတော့ သတင်းအမှားတွေလွင့်နေတဲ့ပြည်ပမီဒီယာ (မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်)တွေကို သတင်းအမှားတွေလွင့်ချင်တိုင်းလွင့်ခွင့်မရအောင် စုစုစည်းစည်းညီညီညာညာနဲ့ကောင်းကောင်းတုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့ကြတာပါ။ မြန်မာဘာသာနဲ့သတင်းတွေဖြန့်နိုင်ခဲ့သလို အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်သူတွေကလည်း သတင်းတွေကိုဘာသာပြန်ပြီး Website တကာကို သတင်းဖြန့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ဘာမပြန်နိုင်တဲ့သူတွေကလည်း ဘာသာပြန်ထားတဲ့ Postတွေကိုကူးယူပြီး Facebook နဲ့ Twitter တို့လို Social Network တွေကနေသတင်းအမှားတွေကို တက်ညီလက်ညီတုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး Online ပေါ်မှာ စွမ်းသလောက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသူတွေမို့ ဂုဏ်ပြုသင့်တဲ့သူတွေပါပဲ။မြန်မာပြည်ပြင်ပက ဒေါ်လာရှာစား ရိုဟင်ဂျာ ကြော်ငြာသမား တဖြစ်လဲဘင်္ဂလီရိုဟင်ဂျာရှေ့နေများဖြစ်ကြတဲ့ BBC၊ VOA၊ RFA၊ DVB (မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တာဝန်ခံတွေ) နဲ့ IRRAWADDY တို့တတွေကတော့ မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်တော့ဘဲ ပျာယာခပ် ချောင်ပိတ်ကုန်ပါတော့တယ်။မျက်နှာဖုံးတွေကွာကြပြီး အရှက်ရကုန်ခဲ့ပါတော့တယ်။အကောင်းဆုံးရလာဒ်အနေနဲ့ကတော့ အရေးဟဲ့ အကြောင်းဟဲ့ ဆိုရင် ဘယ်သူတွေကတိုင်းပြည်မျက်နှာကို ကြည့်ပြီး ဘယ်သူတွေက ဘယ်သူတွေက အခွင့်အရေးယူပြီးနိုင်ငံရေးကစားတဲ့သူလဲဆိုတာ သဲသဲကွဲကွဲ သိခဲ့ရတာ အမြတ်ပါပဲ။Myanmar Express
အသတ်ခံရသော ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ၁၀ဦး အလောင်း ပြန်ရ
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင် မြို့နယ်တွင် ဇွန်လ ၁၉ရက် နေ့က ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများ၏ ဆူပူ အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် အသတ်ခံရသော ရခိုင် တိုင်းရင်းသား ၁၀ဦး၏ အလောင်းကို ပြန်ပေးရန် စစ်တပ်အကူ အညီဖြင့် တောင်းယူနေရာ သုံးရက်အကြာ ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့က အလောင်းများ ပြန်လည်ရရှိခဲ့ကြောင်း ရသေ့တောင်မြို့နယ် ဒေသခံများက “ ရရှိတဲ့ အလောင်းက ၁၀ လောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်လောင်း မီးရှို့ သတ်ထားတဲ့ အတွက် အရိုးဘဲ ရပါတယ်။ ကျန်ခုနှစ်လောင်းကလည်း ရုပ်ပျက် ဆင်းပျက် ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် မှတ်မရတော့ဘူး။ နှစ်လောင်းကိုဘဲ မှတ်ရပါတယ်” ဟု ဒေသခံ တစ်ဦးက နိရဉ္စရာသို့ ပြောသည်။ယခုအခါ အလောင်းများကို အနောက်ပြင် မွတ်ဆလင်ရွာမှ ကူတောင်သို့ သယ်ယူလာကြပြီ ဖြစ်ကြောင်း သူက ဆိုသည်။“ အလောင်းတွေကိုတော့ ကူတောင်ကို အခုဘဲ သယ်ယူလာပါပြီ။ ဒီနေ့ဘဲ သဂြိုလ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။သေဆုံးသူများ သန္တာအောင်၊ မောင် အောင်အောင်ထွန်း ၊ ဦးတင်လှိုင် (စစ်မှုထမ်းဟောင်း)၊ ဦးစိုးသန်း (အလယ်တန်းပြ ကျောင်းဆရာ)၊ ဦးပြူးချေ (အရပ်သား)၊ မောင် ကျော်မင်းထွန်း (ဗွီဒီယို မင်းသား)လောင်းချောင်းကျေးရွာ၊၊ ဦးသောင်းရွှေထွန်း (အရပ်သား)၊ ဦးသန်းရွှေ (အရပ်သား)၊ ဦးသန်းဝင်း (အရပ်သား) နှင့် ဦးထွန်းဘော် (အရပ်သား) တို့ ဖြစ်ကြသည်။ဦးသိန်းဟန် (ကျောင်းဆရာ (ငြိမ်း)၏ အလောင်းအား အခင်း ဖြစ်ပွားသည့် ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ ရရှိခဲ့သည်။ဒဏ်ရာ ရရှိသူများမှာ ဦးကျော်ဝင်း (ဒဏ်ရာပြင်းထန်-စစ်တွေဆေးရုံသို့ ပို့)၊ ဦးဌေးချေ (ဒဏ်ရာရ-ယမ်းထောင်းသေနတ် ဒဏ်ရာ)၊ ဦးလှထွန်းသိန်း (အတွင်းလူနာ-ယမ်းထောင်းသေနတ် ဒဏ်ရာ) တို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “တစ်ယောက်ဆို အရိုးပဲကျန်တယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေကို သတ်ပြီး မီးရှို့ခံထားရတယ်“ ဟု ယင်းအလောင်းများကို သွားရောက်ကြည့်ရှု့ခဲ့သော ဒေသခံ တစ်ဦးက ဆိုသည်။ရသေ့တောင်မြို့နယ်ရှိ ဘင်္ဂါလီများ နေထိုင်ရာ အနောက်ပြင် ကျေးရွာမှ ဆူပူ အကြမ်းဖက်သူများသည် ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ နံနက် ၅ နာရီခန့် တွင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ နေထိုင်ရာ ကူတောင်ကျေးရွာကို ဝင်ရောက် မီးရှို့ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းမီးရှို့ ဖျက်ဆီးသူများကို ပြန်လည် နှိမ်နင်းရန် လိုက်လံရာမှ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကို အနောက်ပြင် ကျေးရွာနား အရောက်တွင် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများက သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အလောင်းများကိုပါ ဖျောက်ဖျက်ခဲ့ကြောင်း ရသေ့တောင်မြို့ ကူတောင်ကျေးရွာ ဒေသခံများက ပြောကြားသည်။ယင်းအကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ၁၀ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၁၃ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း ရသေ့တောင်မြို့နယ် ဒေသခံများကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းချက် အရ သိရှိရသည်။ Myanmar Express
ဧဝရက်တောင်ထိပ်သို့ တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံး ဂျပန်အမျိုးသား
[image: ဧဝရက်တောင်ထိပ်သို့ တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံး ဂျပန်အမျိုးသား]
တိုကျို မေ ၂၃ ဂျပန်နိုင်ငံမှ အသက် ၈ဝ အရွယ် အဖိုးအို တစ်ဦးဖြစ်သူ ယူ...